Had3s.com: ဘိုမောင် - အနက်ရှိုင်းဆုံး [Credit: အတွေးပင်လယ်ပြာ]
ဘိုမောင် - အနက်ရှိုင်းဆုံး [Credit: အတွေးပင်လယ်ပြာ]
အသားလတ်လတ် ..နှာတန်ပေါ်ပေါ် ..မေးရိုးလေးထောင့်..မျက်ခုံးမွေးထူထူနဲ့ ဆံပင်ကို အနောက်လှန်ဖီးထားသည့် အသက်၃၀ခန့် ဗလတောင့်တောင့် အရပ်မြင့်မြင့် လူရွယ်တယောက်...“ငြိမ်းချမ်း”..မှာအရက်သောက်နေသည်။ ကြက်သွေးရောင် စပို့ရှပ်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အပြာရောင် ၀တ်ထား သော လူရွယ်သည် တစုံတခုကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေပုံရသည်။
“ငြိမ်းချမ်း” မှာ သူ ထိုင်နေကျ..စားနေကျ။ ဒီနေ့တော့ သူတယောက်ထဲ။ အဆောက်အဦး ထဲမှာ မထိုင်ဘဲ ခြံဝင်းထဲက ချောင်ကျကျစားပွဲမှာ ထိုင်ရင်း ဒပ်ဘယ်လ်ဘလက် တလုံး ဖွင့်ကာ သောက်နေသည်။
အဆောက်အဦးထဲမှာ စားသောက်သူတွေ များပေမဲ့ ခြံဝင်းထဲမှာ လူသိပ် မရှိလှဘူး။ ခြံထဲမှာ ထိုင်စားချင်သူတွေကို ခြင်မကိုက်အောင် စီမံထားတာကို ဖြိုးမောက် သဘောကျနေသည်။ ခါတိုင်း.. သူ့တပည့်တပန်းတွေ..အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ “ငြိမ်းချမ်း” မှာ သူလာလာစားတတ်သည်။
ဒီနေ့ မရည်ရွယ်ဘဲ သူ ငြိမ်းချမ်းကို ရောက်လာတာ။ တခါတလေလဲ တယောက်ထဲ သူ နေချင်သည်။ တယောက်ထဲ တွေးချင်တာ တွေးပြီး အရက်သောက်ရတာ သူ ကြိုက်သည်။ ငြိမ်းချမ်း မှာက အရက်မျိုးစုံ..ဘီယာမျိုးစုံ ရသည်။ အစားအသောက်က သိပ် အ
ကောင်းကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟင်းလျာတွေ ရသည်။ ဂျီသား..ဆတ်သား ..ယုန်သား လို တော
မှောင်လာပြီမို့..သူထိုင်နေတဲ့ ခြံဝင်းထဲ မီးရောင်စုံလေးတွေ လင်းလာသည်။ သူ့ဘေးမှာ ခြံစည်းရိုးအဖြစ် အလှစိုက်ထားတဲ့ ၀ါးပင်စိမ်းလေးတွေကို တွေ့နိုင်အောင် ထိုးပြတဲ့ မီးမောင်း အသေးစားလေးတွေ လင်းလာသည်။ အဖြူရောင် ၀တ်စုံတွေ ၀တ်ထားပြီး အနက်ရောင် လည်စည်းတွေ စည်းထားတဲ့ စားပွဲထိုး လူငယ်တွေက စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ဘန်းတွေနဲ့ သယ်ယူလာနေကြသည်။
ဖြိုးမောက် ဒီနေ့ ညနေ စိတ်မပျော် ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းမှာ သူထိုင်နေပေမဲ့ သူ့ရင်ထဲမှာ ငြိမ်းလဲ မငြိမ်းချမ်းဘူး။ သူ့ရင်တွေ ပူနေသည်။
မိသော် ကြောင့်။ မိသော် သူ့ကို စိတ်ဒုက္ခအမြဲပေးသည်။ သူ မိသော်ကို သိပ်ချစ်တာ မိသော် သိသည်။ သိလို့ သူ့ကို မိသော် သိပ်နိုင်တာဘဲ။ မိသော် သူ့အပေါ်ဆိုးပေမဲ့ ဖြိုးမောက် မိသော်ကို မပြတ်နိုင်ဘူး။ မဖြတ်နိုင်ဘူး။
မိသော်ရဲ့ နံမည်က သော်သော်ဝင်းတင့်။
မိသော်သည် တွံတေး ဇာတိ ဖြစ်သည်။ မြို့ပေါ်က မဟုတ်ဘူး။ မိသော် ကြီးပွားချင်လို့ ရန်ကုန်ကို တက်လာသည်။ မိသော်တို့ နေတဲ့ အရပ်ဖက်က ဒီလိုဘဲ ရန်ကုန် တက်လာပြီး အရမ်းကြီးပွား မြင့်တက်သွားတဲ့သူတွေ ရှိလို့ မိသော်လဲ စွန့်စားပြီး အဖေနဲ့ အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး ရန်ကုန်ကို ထွက်လာခဲ့တာ။
မိသော် ရရာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ရန်ကုန်မြေမှာ အခြေချနိုင်ရေး ကြိုးစားရသည်။ အလုံ ကမ်းနားဘက် က
မာဆတ်ခန်းတခုမှာ ၀င်လုပ်ရသည်။ မာဆတ်လာတဲ့ လူတွေက ဟိုကိုင်ဒီနှိုက်နဲ့ လုပ်ချင်ကြလို့ စိတ်ပျက်သည်။ ကေတီဗီကို ပြောင်းပြီး လုပ်ကြည့်သည်.။ ဘာမှမထူး။ ယောင်္ကျားဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါတွေက အတူတူ အနုနု တွေချည်းပါဘဲ . .။ တကယ်တမ်း သူတို့က မိသော်ကို စားချင်ဝါးချင်.. မြီးချင်တဲ့ လူတွေ ချည်းဘဲ။
ရန်ကုန်မှာကလဲ မာဆတ်တွေ ရော မာစွပ်တွေရော ရှိနေတော့ မာဆတ်မှာ လုပ်တယ်ဆိုရင် လူတွေက သိပ်အထင်အမြင်သေးကြတာ။ မိသော်လဲ တွံတေးကို ပြန်ရင် မာဆတ်မှာ လုပ်တယ် ဆိုတာ မပြောဘူး။ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုး လုပ်သည် လို့ အားလုံးကို ညာပြောသည်။
မိသော်လဲ ရန်ကုန် မှာနေတာ လုပ်တာ ကြာ လာတော့ ..လျင်လာသည်။ လည်လာသည်။ ပညာတွေ စုံလာသည်။ ယောင်္ကျားတွေကို ဘယ်လို အချဉ်ဖေါက်ရမယ် ဆိုတာ တတ်သိ နားလည်လာသည်။
အချီကြီး ထောနိုင်တဲ့ ဘောစိ တယောက် ယောက်နဲ့ တွေ့ရင်ကိုယ့်ရှိတာတွေ ပုံအောလိုက်ပြီး အပိုင်ကိုင်ထားလိုက်မည် လို့ စိတ်ကူးသည်။
အနက်ရောင် တံဆိပ်ပတ်နဲ့ ဂျော်နီဝါးကား ပုလင်း တ၀က်နီးပါး ကျိုးနေပြီ။ ဖြိုးမောက် မိသော်အတွက် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အရက်ကို ဖိသောက်နေသည်။ ဖြိုးမောက်သည်ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်သော အားကစားသမားတယောက် ဖြစ်သည်။ အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်ခဲသည်။ အခုတော့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ သောက်တာ။
မိသော် ရီးစားတွေ များခဲ့တာ သိရဲ့သားနဲ့ သူ မိသော်ကို ချစ်ခဲ့သည်။ မိသော်သည် အရပ်မြင့်မြင့် ဗလကောင်းကောင်းနဲ့ ယောင်္ကျားပီသ သော ဖြိုးမောက်ကို တွေ့တာနဲ့ သဘောကျသွားသည်။ လူပုံကိုတင် မဟုတ်..။ စီးလာတဲ့ ပါဂျဲရိုးကား..သူဝတ်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ် အဖိုးတန် အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်တွေ . .အားလုံးသဘောကျသည်။
ဖြိုးမောက်သည် လူကြမ်းလူရမ်းတယောက် လို့ ထင်စရာ ရှိပေမဲ့ စိတ်ရင်းကောင်းကြောင်း မိသော် သိလာသော
အခါ ဖြိုးမောက်ကို ခဏခဏ တွေ့ဖြစ်သည်။ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေမှာ ထိုင်သည်။ ကုန်တိုက် တွေ မှာဈေးဝယ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားသည်။
ဖြိုးမောက်ရဲ့ အချစ်ကို မိသော် လက်ခံလိုက်သည်။
ဖြိုးမောက်နဲ့ မိသော် ပျော်လိုက် ကဲလိုက်ကြတာ မိုးမမြင်လေမမြင်ဘဲ။ မိသော် သူနဲ့ မတွေ့ခင်က ဘာဘဲ ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ဖြိုးမောက်က ဂရုမစိုက်ဘူး။ သူ့ကို ချစ်ရင်ပြီးရော။ သူ့အပေါ်တော့ သစ္စာ ရှိစေချင်သည်။
ဖြိုးမောက်သည် မိဘတွေ မရှိတော့တဲ့ နောက် ညီမလေး မိုးစက်ဖြူကို အရမ်းဂရုစိုက်သည်။ မိဘမဲ့ ဖြစ်သွား
သော ညီမလေးကို မိဘတွေကိုယ်စား အစစ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်သည်။ အလိုလိုက်သည်။ ဖြိုးမောက်
သည် မိဘမရှိတော့ပေမဲ့ သတ္တိ ရှိရှိ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ ရင်ဆိုင်သည်။
ငွေကို မရရတဲ့ နည်းနဲ့ ရှာခဲ့သည်။ ထောင်ကျမှာကို မကြောက်။ ဥပဒေကို လက်တလုံးကြား လှည့်ဖျား
ဖို့လဲ ၀န်မလေး။ သူ့မှာ သူခိုင်းရင် လုပ်မဲ့ နောက်လိုက်တွေ ရှိလာသည်။ သူ့ကို ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့
လေးလေးစားစား ဆက်ဆံလာကြတော့ တခြားစီးပွားတူ လုပ်နေတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကလဲ ဖြိုးမောက်ကို လေးစားလာသည်။
မိသော်ကို သူတို့ အိမ်ကို ခေါ်သွားသည်။
ညီမလေး မိုးစက်ဖြူ ဒီနေ့ အိမ်မှာ မရှိဘူးဆိုတာ ဖြိုးမောက် သိသည်။ ညီမလေး သူ့သူငယ်ချင်း မွေးနေ့ ပွဲကို သွားသည်။ တနေကုန် ပျော်ကြမှာ ဖြစ်လို့ ညမှ ပြန်ရောက်မှာ ဖြစ်သည်။
မိသော်သည် ဖြိုးမောက်တို့ အိမ်မှာ သဘောအကျဆုံးက မိုးစက်ဖြူ မွေးထားသည့် ရွှေငါးတွေ ...။ ဂါလံတရာ ကန်
ကြီးတွေ ထဲက ရွှေငါးကြီးတွေက အမြီးရှည်ရှည်တွေ တလွင့်လွင့်နဲ့ ကူးခတ်နေကြသည်။ ရွှေငါးကြီးတွေရဲ့ဘိုက်တွေက ပူလွန်းနေသည် လို့ မိသော် ထင်သည် . .။
မျက်လုံး ပြူးပြူးကြီးတွေနဲ့ ရွှေငါး၀၀ကြီးတွေကို ကြည့်နေတုံး မိသော်ကို ဖြိုးမောက်က ဖက်လိုက်ပြီး မိသော် နှုတ်ခမ်း ထူထူလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ဖိကပ်ကာ စုတ်နမ်းသည်။ မိသော် ကလဲ မတွေ့ဘူး မကြုံဘူးတဲ့ အရိုင်းလေး မဟုတ်ဘူး။ ဖြိုးမောက်ကို တုံ့ပြန်တဲ့ အနမ်းတွေ ပေးလေတော့ အနမ်း သံသရာက ရှည်လျားရတော့သည်။
ဖြိုးမောက်ရဲ့ လက်တွေက အငြိမ်မနေ။ မိသော်ကိုယ်ပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေသည်။ မိသော် တင်ပါးတွေက သိပ်မကြီးလှပေမဲ့ အနောက်ကို သိသိသာသာ ထွက်နေသည်။ မိသော် တင်ပါးတွေကို ဖြိုးမောက် ပွတ်သပ်သည်။ကိုင်တွယ်သည်။ အသာကိုင်ရုံနဲ့ အားမရတော့ဘဲ ဆုတ်ညှစ်လာသည်။ မိသော် ကလဲ ဖြိုးမောက်ရဲ့ ကျောပြင်ကို ဖက်တွယ် ကုတ်ခြစ်နေသည်။ တိတ်ဆိတ် နေတဲ့ တိုက်ကြီး အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းထဲ မိသော်နဲ့ ဖြိုးမောက် တို့ ကြမ်းပြင်က ပါးရှားကော်ဇော နီညိုရောင် ပေါ်မှာ လဲကျသွားကြသောအခါ မိသော်ရဲ့ ရွှေရောင် ခါးပတ်ပြားလေးကို ဖြိုးမောက်က ပထမဆုံး ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။
နဂိုထဲက လျော့ရည်းရည်း ဖြစ်နေတဲ့ မိသော်ရဲ့ ထမိန်လေးသည် ရွှေရောင် ခါးပတ်ကို ဖြုတ်လိုက်သောအခါ ပြေကျွတ်နေသည်။ ၀မ်းပျဉ်သား ဖွေးဖွေးတွေကို တစွန်းတစ မြင်နေရသည်။
ဖြိုးမောက်ရဲ့ အနမ်းတွေက သဲသဲမဲမဲ ဆက်တိုက် မပြတ်ဘူး။ သူ့လက်တွေက မိသော်ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေ
ကို မိသော်ကိုယ်ပေါ်က ဖယ်ခွာပစ်နေသည်။ မိသော်လဲ သူ့ကို မတားမိ။ ခဏချင်း မှာဘဲ မိသော်သည်
အ၀တ်အစား လုံးဝ မဲ့သွားရသည် ..ဖြိုးမောက်လဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို ဘယ်အချိ်န်က ချွတ်
ပစ်လိုက်သလဲ မသိ။ကိုယ်လုံးတီးကြီး ဖြစ်နေသည်။ သူ့ပေါင်ကြားက လိင်တန်က မတ်မတ်ကြီး တောင်နေ
မိသော်ရဲ့ တဏှာစိတ်ကြောင့် တင်းမာပြီး ထောင်ထနေတဲ့ နို့သီးခေါင်း နီနီလေးတွေကို ဖြိုးမောက် စို့သည်။
တဖက်ပြီး တဖက် စို့သည်။ မိသော် သူ့ခေါင်းကို တအားဖက်ပြီး မျက်လုံးတွေ ပိတ်ထားမိရသည်။
မိသော်ရဲ့ ပေါင်တန်သွယ်သွယ်တွေ ကြားက အင်္ဂါစပ်ကြီးက တအားဖေါင်းမို့လွန်းနေသည် လို့ ဖြိုးမောက် ထင်သည်။ မိသော် ပေါင်ကြားကို မျက်နှာ အပ်ပြီး အင်္ဂါစပ်ကို လျာနဲ့ ယက်တော့ မိသော် သူ့ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို တအားဆွဲကိုင်ပြီး ခါးလေးကော့ မျက်နှာလေးမော့ကာ တအင်းအင်းနဲ့ ညည်းငြူနေသည်။ မကြာခင်မှာဘဲ ဖြိုးမောက်သည် မိသော်ရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားကာ မိသော် ကို စပ်ရှက်လေရာ ဘာဂျာ အမှုတ်ခံထားရတဲ့ မိသော်မှာ စိတ်တွေ တအားထကြွနေရပြီး ..အရမ်းယားလွန်းနေလို့ ဖြိုးမောက် လုပ်သမျှ ကျေကျေ နပ်နပ်ကြီး ..ခံယူ နေလေသည်။
ဖြိုးမောက် လျာကြီး ဖိဖိယက်လိုက်ချိန် မိသော်ကလဲ ဖင်ကို ကော့ကော့ပေးသည် ...။
“ အားဟား..ဟား...ကိုဖြိုး ...အား ...မိသော် မနေတတ်တော့ဘူး … ”
ဖြိုးမောက်က ဖိဖိယက်နေဆဲ။ မိသော်က ယက်တာကို ရပ်စေချင်နေပြီ။
“ကိုဖြိုး ..ကိုဖြိုး ..တော်..တော်ပြီ ...”
ဖြိုးမောက် ယက်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး ထရပ်လိုက်သည်။ သူ့လိင်တန်ကြီးက မိသော် မျက်နှာ နားမှာ ကပ်ရက်
ကြီး ရောက်လာသည်။ ထိပ်ဖူးဒစ်ပြဲကြီးက နီညိုညို ကြီး တင်းပြောင်နေသည်။ တော်တော် တုတ်တဲ့ လိင်ချောင်း
ကြီး။ ဒီ အတန်ကြီးကို ကြည့်ပြီး မိသော် ပေါင်ကြားက အဖုတ်ထဲ ယားကျိကျိ ဖြစ်လာရသည်။ ခံချင်စိတ်တွေ
ဖြစ်လာရသည်။ ဒါကြီးနဲ့ ထိုးဆောင့်တာကို ခံချင်လာမိသည်..။
သူမပါးစပ်နား ကပ်ရက်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖူးကြီးကို ကြည့်ပြီး..မိသော် တံတွေး ဂွပ်ကနဲ မြိုချလိုက်မိသည်။
“ကိုဖြိုး..မိသော်ကို ဘာလုပ်စေချင်တာလဲဟင် ..”
“ စုတ်ပေးကွာ ..”
“ မိသော် စုတ်တတ်ဘူး . .”
မိသော် ဒစ်လုံးထိပ်ဖူးကြီးကို ဖမ်းငုံလိုက်သည်။ မိသော် မစုတ်တတ် စုတ် တတ် ပုံစံနဲ့ စုတ်ပေးနေသည်။
“ စုတ်..စုတ် ..လျာလေးနဲ့ ကလိပေး ...စုတ်.နှစ်ဘက်နဲ့ကိုင်ဆုတ်ရင်း ပြောနေသည်။ မိသော် လိင်တန်ကို
ပြွတ်ကနဲ..ပြွတ်ကနဲ စုတ်နေတုံး ဖြိုးမောက် ဂွေးစ်နှစ်လုံးက ခါရမ်းနေသည်။ မိသော် နှုတ်ခမ်းနီ ရဲရဲ ဆိုးထားတဲ့
နှုတ်ခမ်းဖေါင်းဖေါင်း ပြည့်ပြည့်လေးတွေ ကြားမှာ သူ့လိင်တန်ညိုညို တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး ရောက်နေတာကိုက ဖြိုးမောက် အရမ်း ကျေနပ်နေသည်။
“အိုး..ကောင်းတယ် . .အရမ်းကောင်းတယ် . .စုတ်..စုတ် ..မိသော်....စုတ်..လျာနဲ့ ယက်ပေး . .”
မိသော် စုတ်နေချိန် တချက် တချက် ပြွတ်..ပြွတ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်နေသည်။ မိသော်ရဲ့ လျာလေးက လိင်တန်ထိပ်က အပေါက်လေးကို ကလိပေးနေသည်။ မိသော်သည် အစောထဲက အတွေ့အကြုံရှိမည် လို့ဖြိုးမောက် ခန့်မှန်းမိသည်။ မိသော် စုတ်ပေးတာတွေက ကျွမ်းလွန်းနေလို့။
အဲဒီနေ့ကထဲက ဖြိုးမောက်သည် မိသော်ရဲ့ ပုလွေကို တအားကြိုက် သွား ခိုက်သွားသည်။ ပုလွေတော်တော်
ကြာကြာ မှုတ်ပေးအပြီး မိသော်ကို သူ စပ်ရှက်သည်။ သူ့လိင်တန်ကို မိသော်ထဲ သွင်းဖို့ လွယ်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ သူထင်ထားပေမဲ့ မိသော်သည် သူ့လိင်တန်ကို လက်ခံနိုင်တာ တွေ့ရလို့ သူ့ထက်အရင် မိသော်စပ်ရှက်ဖူးနေလိမ့်မည် လို့ သူ သိလိုက်သည်။ မိသော် အပျို မစစ်ဘူး လို့ သူထင်သည်။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်
ဖြစ် မိသော်ကို သူ ကြိုက်သည်။
မိသော်ရဲ့ ဒီဇိုင်းက လန်းသည်။ မိုက်သည်။
မိသော်နဲ့ တွဲသွားရင် လူတွေ ကြည့်လိုက်ကြတာ အရမ်းဘဲ။ ဖြိုးမောက်ကို အနီးကပ် ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း
အရင်းအခြာတွေက မိသော်ကို မယုံဖို့ သတိပေးသည်။ ဖြိုးမောက် သတိပေးသူတွေကို ဒေါသတကြီး
မိသော်ကို မပြောနဲ့..။ မိသော်ကို မထိနဲ့။
မိသော် မှ မိသော်။ မိသော်အတွက် ဆို သူ မနှမြောဘူး။ မိသော် လိုချင်တာ အားလုံး သူ ပေးသည် .။
မိသော်ကလဲ ဖြိုးမောက် လိုချင်တာ အကုန် ပေးသည်။ ဖြိုးမောက် စွဲရတာက မိသော်ရဲ့ ပုလွေ။ မိသော်
မိသော်သည် ပုလွေ ပညာရှင်လေး တယောက်ဘဲ။
ပုလွေ အရမ်းကောင်းပြီး သူလိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကို ကောင်းကောင်း မှုတ်ပေးသည်။ မိသော် စိတ်တွေ
လာပြီး လိုချင်လာရင်လဲ ထမိန်လေး လှန်..ပေါင်လေး ကားပြီး ..“ကိုဖြိုး..ယက်ပေး ..” ဆိုပြီး တောင်းဆိုတတ်
မိသော်သည် ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် ဆိုသလိုဘဲ ခဏလဲကြာရော ဖေါက်လာသည်။ ဖြိုးမောက် ဆီက သူမလိုချင်တာတွေတော်တော်လေး ရပြီးတဲ့နောက် ဖြိုးမောက် ကွယ်ရာမှာ တခြားလူတွေနဲ့ တွဲလာသည်။
မိသော်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အသဲအသန် ဖြစ်တတ်တာကို သိကြတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေက မိသော် ဖြိုးမောက်
ကွယ်ရာမှာ ကဲနေတာကို သူ့ကို ပြန်မပြောကြ။ ပြန်မပြောရဲကြ။
ဖြိုးမောက်ကို မိသော် အကြောင်း ပြန်ပြောတာက ဖြိုးမောက်ရဲ့ ညီမလေး မိုးစက်ဖြူ။ မိုးစက်ဖြူ က
မိသော် တခြား လူတယောက်နဲ့ တွဲနေတာ တွေ့သည်။
“ကိုကိုကြီး..သော်သော်ဝင်းတင့်ကို လူတယောက်နဲ့ တွဲနေတာ မိုးစက် တွေ့တယ် ..ကိုကြီး သိသင့်တယ် ထင်လို့မိုးစက် ပြောပြတာ ...” လို့ ညီမလေး လာပြောတော့ ဖြိုးမောက် “ မိုးစက်..နင် တကယ် တွေ့ခဲ့လား ..”
လို့မေးသည်။ တခြားလူသာဆိုရင် ဖြိုးမောက် ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး။
မိသော်ကို ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်ကြည့်သည်။ မိသော် မရှိ။ ဟန်းဖုန်းကို ဆက်တော့လဲ မထူး..။
ဖြိုးမောက် မိသော် အတွက် သောကတွေ ပင်လယ်ဝေ နေသည်။ စိတ်ဆင်းရဲနေသည်။ မိသော် သူ့ကို
ရက်စက်ပြီလား ...။ မိသော် ဘယ်ရောက်နေလဲ။
မိသော်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဝေမာစိုးကို ဖုန်းခေါ်မေးတော့လည်း အဖြေ အတိအကျ မရဘူး။ ဖြိုးမောက် စိတ်သောက ရောက်ရသည်။ ကားမောင်းလာရင်း “ ငြိမ်းချမ်း စားသောက်ဆိုင် ” နားကို ရောက်လာတာနဲ့ ခြံထဲ ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်ပြီး အရက်ထိုင်သောက်နေတာ ဖြစ်သည်။
ပုလင်း တ၀က်နီးပါး ကျိုးချိန် သူ့စားပွဲကို လူတယောက် ရောက်လာသည်။ သူက ဒီလူကို စားပွဲထိုး မှတ်လို့
၀ါးစရာ အမြီး တခုခု မှာမလို့။ နောက်တောက့ သေသေချာချာ လှည့်ကြည့်တော့ စားပွဲထိုး မဟုတ်ဘူး။
ဒီလူက တင်းမာလွန်းတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ..“ မြေခွေး သန်းဌေး ..မင်း ဒီတခါတော့ မလွတ်ပြေးနိုင်တာ့ဘူးကွာ ..စာရင်းရှင်းလိုက်ကြရအောင် ..ဟင်..ဘာမမှတ်မိချင်ယောင် ဆောင်နေတာလဲ ..ငါ ပွဲစား ၀မ်းတင်ရဲ့ ညီ ၀မ်းမောင် လေ..မင်း ဘတ်သွား လို့ မင်းကို စာရင်းရှင်းချင်နေတာ ..” လို့ ပြောရင်း အိတ်ထဲကို နှိုက်ထားတဲ့ လက်ကို ထုတ်လိုက်တော့ အသွား ခြောက်လက်မ ဒါးတချောင်းကို တွေ့လိုက်ရသည်။
မြေခွေးသန်းဌေး ဆိုတာက မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းက လူတွေ သူ့ကို ခေါ်တဲ့ တခြားနံမည်တခု။
မြေခွေးတကောင်လိုဘဲ ကောက်ကျစ်သည် ဆိုပြီးခေါ်တာ။ သန်းဌေး ဆိုတာက သူ့နံမည် ၁၀ခု လောက်ထဲက
တခုသော နံမည် ဖြစ်သည်။
“ ဘာတွေ လာပြောနေတဲာ ..ငါ ဘာမှ မင်းတို့ကို မဘတ်ဘူး ...ငါကြားက ပွဲစား လုပ်ခဲ့တာဘဲ ..ပစ္စည်း စစ် မ
စစ် ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး ..မင်းတို့ ညံ့လို့ မင်းတို့ ခံရတာ ..”
“ အို..မလိုချင်ဘူး ..မင်းကို အပြတ်ရှင်းဖို့ ငါ့အကိုက မှာလိုက်တယ် ..”
ဒီလူက ဒါးကို ချိန်ရွယ်ထားတုံး သူ့ဘေးတဖက်တချက်မှာ လူတွေ ရောက်လာသည်။
သူ အခု ဒီကောင် ပြောနေတာတွေကို ကောင်းကောင်း သိသည်။ မှတ်မိသည်။ သူတို့လောကက ဒီလိုဘဲ။ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက် ..ဂျင်ပေါ်က ထုံး ...လျင်သူစားတမ်း ...။
ဟား...ဆိုင်ပြင် ရောက်တဲ့ အထိတောင် မစောင့်ကြပါလား။ ဆိုင် ခြံဝင်းထဲမှာဘဲ သူ့ကို ၀ိုင်းကိုင်ကြတော့မဲ့ သဘော ..။ ၁ယောက်နဲ့ ၆ ယောက်။ သူက အရက်လဲတော်တော် သောက်ထားသည်..။ နှစ်ယောက် သုံးယောက်လောက် ဆိုရင် သူ ဂရုမစိုက်ဘူး။
သူ ပြေးပေါက် မသိမသာ ကြည့်နေသည်။ သူ့ကားက ခြံအပြင်မှာ ရပ်ထားတာ။ သူ မတ်တပ်ထ ရပ်လိုက်
တာနဲ့ ၀မ်းမောင် ဆိုတဲ့ ကောင်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေက စပြီး တိုက်ခိုက်ကြသည်။ သူ့ကို ထိုးစိုက်လာတဲ့ ဒါးကိုင် လက်ကို သူ့ ဘယ်လက်နဲ့ တားလိုက်ပြီး ၀မ်းမောင် မျက်နှာကို ညာ လက်သီးနဲ့ ထိုးချလိုက်သည်။
၀မ်းမောင် ဖင်ထိုင်ရက် လန်ကျသွားချိန် သူ့လူတွေ ခုန်ပေါက် ၀င်လာကြသည်။ နှစ်တောင်လောက် ရှည်တဲ့ ဒုတ်တွေနဲ့ အုတ်ခဲကျိုးတွေ..ကင်ဒိုဓါးရှည်တွေနဲ့ သူ့ကို တိုက်ခိုက်သည်။ သစ်သားခေါက်ကုလားထိုင်တလုံးနဲ့ ပြန်တား ပြန်ရိုက်သည်။ အခြေအနေက သိပ်မကောင်း။ သူသောက်တာ များသွားသည်။ တကယ်တမ်း
၆ယောက် တယောက် မို့ သူ့ပုခုံးကို ဒုတ်ချက်မိသွားလို့ သူ ထင်သလောက် ပြန်မဖိုက်နိုင်ဘူး။ သူ
စပြီး ခံနေရပြီ။ ဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ထားတာ တခု ဖြစ်လာသည်။ သူ့စားပွဲဘေးက စားပွဲမှာ ဘီယာထိုင်သောက်နေတဲ့ လူငယ်တယောက်က ၀ုန်းကနဲ ထလာပြီး သူ့လက်နှစ်ဘက် မှာကိုင်ထားတဲ့ ဘီယာပုလင်းတွေနဲ့ ၀င်ရိုက် တာတွေ့လိုက်ရသည်။ ဖေါင်းကနဲ ဖေါင်းကနဲ။ သူလဲ သူ့ဖက်က ၀င်ပါတဲ့လူ
ရှိလာလို့ အားတက်ပြီး ခေါက်ကုလားထိုင်နဲ့ တအားဝင်ရိုက်သည်။
သူ့ကို ၀င်ကူတဲ့ လူက တိုက်ရည်ခိုက်ရည်တော်တော် ကောင်းတဲ့ပုံဘဲ။ ဘီယာပုလင်းတွေ သူ့လက်ထဲက လွတ်ထွက်သွားတော့ သူ့လက်သီး လက်ဝါးစောင်းတွေနဲ့ အတင်းဝင်ထိုးရိုက်တော့တာဘဲ။ ဒီလူရဲ့ လက်က မြန်ဆန်သလို အားပြင်း ထိရောက်သည်။ ၀မ်းမောင်တို့ လူစုတော်တော် အထိနာသွားသည်။ လုံးဝ မြေ
ပေါ် မှောက်နေသူတွေ ရှိသလို ဒူးထောက်ထိုင်ကာ သွေးတွေ မြင်မကောင်းအောင် ပေကျံနေတဲ့ မျက်နှာကို လက်နဲ့
အုပ်နေသူတွေလဲ ရှိသည်။ သူ ခြံပြင်ကို ပြေးထွက်ခဲ့တော့ ၀င်ကူတဲ့ လူ အနောက်က ပါလာသည်။
“ ကျေးဇူးဘဲ ..လာဗျာ..ကျနော့်မှာ ကားပါတယ် ...”
သူတို့နှစ်ယောက် “ ငြိမ်းချမ်း” ရှိနေတဲ့ လမ်းချိုးလေး ထဲက ထွက်လာတဲ့ အချိန် ရဲကားတစီး အဲဒီလမ်းထဲ
ချိုးကွေ့ဝင်သွားတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူတို့ သီသီလေး လွတ်လာသည်။
ဒီအရပ်ဒေသ ကနေ ဝေးသွားအောင် မောင်းလိုက်သည်။ စိတ်ချရတဲ့ ခပ်ဝေးဝေး ရောက်မှ သူ့ကို ၀င်ကူတဲ့ လူကို ဘယ်ကို လိုက်ပို့ရမလဲ မေးသည်။ ကျနော်က လှိုင်သာယာဘက်မှာ နေတာ..သိပ်ဝေးလွန်းတယ် ..
ကျနော့်ဖါသာ ပြန်လိုက်မယ်..ကားဂိတ် တခုခုနားသာ ချထားခဲ့ပါဗျာ ..လို့ ပြောသည်။
သူလဲ ဟိုလူတွေ ၀ိုင်းစမ ထားတာကြောင့် ပေါက်ပြဲ ဖူးယောင်နေလို့ ပြန်ချင်ပြီ။ သူ့ကို ကား မှတ်တိုင်တခု မှာ
ရပ်ပေးလိုက်ပြီး သူ့လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ပါတဲ့ ကပ်ပြားလေး ပေးလိုက်သည်။
“ ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ပါဗျာ ..ဒီမှာ လိပ်စာကပ်...လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ပါတယ် ..ကျနော် ခင်ဗျား ကျေးဇူးကို
ပြန်ဆပ်ချင်တယ် .. ခင်ဗျား ၀င်ဖိုက်ပေလို့ဘဲ..ခင်ဗျားသာ ၀င်မကူရင် ကျနော်တော့ ရှောနေလောက်ပြီ ..ဒီကောင်တွေက အသေ ဆော်တာ..”
“ ကျနော်လဲ ၆ ယောက် တယောက် အားချင်း မမျှတာတွေ့လိုက်ရလို့ အားနည်းနေတဲ့ ခင်ဗျား ဘက်က ၀င်ကူမိတာပါ ..ကဲ သွားအုံးမယ် ဗျာ ..နောက်ကို သတိထားဗျာ..တယောက်ထဲ မသွားမလာနဲ့ . .”
“ ကျနော့်ကို ဆက်ဆက် ဖုန်းခေါ်ပါ ..”
ဒီလူ ကား မှတ်တိုင်မှာ ကျန်ခဲ့သည်။
ပေါက်ပြဲ အရောင်မပေါ်တော့တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအနွမ်း ..ဂျင်းဂျက်ကက်နဲ့ ဆံပင် လိန်ကောက်ကောက်နဲ့ ဒီလူ
ကို တနေ့ ပြန် ကျေးဇူးဆပ်ရမည် လို့ သူ့စိတ်ထဲ တွေးလိုက်မိသည်။ သူ ကားပေါ်က အဆင်း ..သူ့နံမည်ကို
မေးတော့..မဲဇာ ..လို့ ပြောသွားသည်။
မဲဇာ … .။
ညီမလေး မိုးစက်ကို သူ့ကို လုယက်တာ ခံရတယ် လို့ဘဲ အလွယ်တကူ သူပြောလိုက်သည်။ တပတ် ကြာလာ
ပေမဲ့ သူ့ကို ကူညီခဲ့တဲ့ မဲဇာ ဆိုတဲ့ လူ သူ့ကို ဖုန်းမခေါ်ဘူး။ ကြည့်၇တာ အခွင့်အရေး ယူတတ်တဲ့ လူစား ဟုတ် ပုံမရ ဘူး။ သူဆက်သွယ် မလာတော့ သူ့ကို ဆက်သွယ်ရအောင် သူ ဘယ်မှာနေလဲ မသိ။ သူက လှိုင်သာယာ ဘက် လို့ဘဲ ပြောသွားတာ။ အတိအကျ လိပ်စာ ပေးမသွားဘူး။
ဒီနေ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းက သူ့ ဆိုင်ကို သွားတော့ မလှမ်းမကမ်းက လဘက်ရည်ဆိုင်လေးထဲ လှမ်းဝင်
သွားတဲ့ မဲဇာကို သူမြင်လိုက်သည်။ ဟိုတနေ့ ညက သူ့ဖက်က ၀င်ဖိုက်တုံးက အ၀တ်အစားနဲ့ဘဲ..။
သူ ကားရပ်ပြီး လဘက်ရည်ဆိုင်လေး ဆီ လျောက်သွားလိုက်သည်။ မဲဇာ ပုံက နံမည်ကျော် မင်းသားကြီး ဦးကျော်ဟိန်း ငယ်ငယ်တုံးက ဒီဇိုင်း မျိုး ...။ အဝေးကနေ တွေ့တာနဲ့ မဲဇာ မှန်း သိလိုက်သည်။ မဲဇာ ၀င်သွားတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင် ထဲ သူလှမ်းဝင်လိုက်သည်။
လဘက်ရည်ဆိုင် ထဲမှာ လူသိပ်မရှိဘူး။ မဲဇာသည် စားပွဲတလုံးမှာ ထိုင်နေသည်။ သူဝင်လာတာကို မသိ။ ဂျာနယ်တစောင်ကို စိတ်ဝင်စား စွာနဲ့ဖတ်နေသည်။ သူ မဲဇာ ရှိနေတဲ့ စားပွဲက ကုလားထိုင်တလုံးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်သည် .။ မဲဇာသည် ဖတ်နေတဲ့ ဂျာနယ်ကို အောက်ကို နဲနဲနှိမ့်ချလိုက်ပြီး ကြည့်သည်။
“ ဟား..ခင်ဗျား ...ကိုဘယ်သူ...ကို....”
“ ဖြိုးမောက် ..”
“ အား ..ဟုတ်ပီ..ကိုဖြိုးမောက် ...”
“ ခင်ဗျားကို တွေ့ချင်နေတာ ..ဘယ်မှာ ရှာရမှန်း မသိလို့ ..ဟိုညတုံးက ကျနော်လဲ ဖိုက်တင်ချထားတော့ နာကျင်ဖူးယောင်နေပြီး ကောင်းကောင်းတောင် စကားမပြောနိုင်ဘူး ..ခင်ဗျား ဆီက လိပ်စာ အတိအကျ မတောင်းလိုက်မိဘူး ...”
“ အေးဗျ..ကျနော့်မှာက ပေးစရာ လိပ်စာ မရှိဘူး . .”
ဖြိုးမောက် သူ့ကို နားမလည်သလို ကြည့်နေလို့ ..မဲဇာက ပြုံးသည်။
“ ကျနော်က လမ်းပေါ်က လူ တယောက်ပါ ..ပလက်ဖေါင်းမင်းသား ဆိုတာမျိုးပေါ့ . . ”
“ အဲဒီညက ခင်ဗျား ၀င်ကူပေလို့ဘဲ..ကိုမဲဇာ ..၆ယောက်တောင် ဆိုတော့..ကျနော်လဲ မဖိုက်နိုင်ဘူး . .”
“ကျနော်လဲ သွားတချောင်းနဲ့သွားတယ် ..ဖူးတာယောင်တာကတော့ ရိုးနေပါပြီ … ”
“ တခုခုသောက်လေ..ဘာမှ မမှာဘူးလား..ကိုမဲဇာ… ”
“ကိုမဲဇာ မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ..မဲဇာဘဲ ခေါ်ပါ..ခင်ဗျားက ကျနော့်ထက် အသက်ကြီးပါတယ်..နောက်ပြီး ကျနော် က
လမ်းဘေးက နင်းပြား ..ကချလာ ..ကလေ ..လူမိုက် … ”
“ ဒီလိုလဲ မပြောပါနဲ့လေ ..ကဲ … ကော်ဖီသောက်မလား ..မှာလိုက်မယ် ..တခုခု စားပါလား . .”
“ အင်း..ကျွေးရင် စားမယ်ဗျာ..ဘာမှ မစားတာ ၂ရက်ကျော်ပြီ ..”
“ ဟ..ဘာဖြစ်လို့ ..”
“ ဘိုင်ပြတ်နေတယ် ..ဟဲဟဲ...ကျနော်က မရှက်ပါဘူး..”
ဖြိုးမောက်လဲ စားစရာမျိုးစုံ မှာသည်။ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ရတဲ့ဟာတွေပေါ့။ ပေါက်စီ..၀က်သားပေါင်း . .ဘဲသားမုန့် ..ကိတ်မုန့် . .။
မဲဇာလဲ မြိန်ရှက်စွာနဲ့ ပလုပ်ပလောင်း စားလေသည်။ ဖြိုးမောက်လဲ မဲဇာ စားတာကို ကြည့်ကောင်းကောင်း
နဲ့ ကြည့်နေသည်။ ပေါက်စီ တွေ တလုံးပြီးတလုံး ပါးစပ်ထဲ သွပ်နေသည်။ဘဲသားမုန့်တွေ လေးခု စားပြီး
တော်တော်လေး စားသောက်ပြီးလို့ နေသာထိုင်သာ ရှိသွားမှ သူ့ကို စကားပြောလေသည် . .။
“ ကျနော့်ကို တွေ့ချင်နေတယ် ဆိုတာ ဘာအတွက်များလဲ ..ကိုဖြိုးမောက် … ... ”
“ ကျနော့်ကို ၀င်ကူသွားတာ..ကယ်သွားတာ ကျေးဇူး ဆပ်ချင်လို့ပေါ့..ဒါနဲ့ ခင်ဗျား ဘာအလုပ်လုပ်လဲ..ကျောင်းသား
“ မဟုတ်ဘူး .. အလုပ်လက်မဲ့..တကောင်ကြွက် ...”
“ ခင်ဗျား အလုပ်လိုချင်ရင် ကျနော် ကူဖို့ မခဲယဉ်းပါဘူး ..ခင်ဗျား ဘာလုပ်တတ်လဲ ..ဟို..ဆိုလိုတာက ..ဘာကျွမ်းကျင်တာ ရှိလဲ..ဥပမာဗျာ ..ကားမောင်းတတ်လား..ကားပြင်တတ်လား ...”
“ ကားလဲ မောင်းတတ်တယ်..ပြင်တာလဲ နဲနဲပါးပါးရတယ် ..အဲ..ကျွမ်းကျင် တာကတော့ ဖိုက်တာဘဲ..လမ်းဘေး
မှာ တသက်လုံး ဖိုက်လာတာ...မြန်မာ့လက်ဝှေ့လဲ တက်ထိုးဘူးတယ် ..သိုင်းလဲ တတ်တယ် ..ဓါးသိုင်း..တုတ်သိုင်း ..ဟားဟား ...”
“ ကြိုက်သွားပြီ ..ကိုမဲဇာ ..အဟဲ..သေနတ်ကော ပစ်တတ်လား . .”
မဲဇာက ဘေးဘီကို ဘယ်ညာ လှည့်ကြည့်ပြီး ..“ ဒါလဲရတယ် ..ပစ်တတ်တယ် ..အစုံပစ်ဖူးတယ် ..ကျနော်က ဘ၀ စုံခဲ့တာ....ဖါးကန့်မှာ ကျောက်စိမ်း တူးဘူးတယ် ..မဲဆောက်မှာ အလုပ်လုပ်ဘူးတယ် ..ဒါဆို သဘောပေါက်ရောပေါ့ ..”
“ ပေါက်ပြီ..ပေါက်ပြီ ...”
“ အထဲကို ၀င်ဘူးလား ...အင်းစိန် . . မော်စကို ပြောတာ ..”
“ အင်း..၀င်လိုက် ထွက်လိုက်ဘဲ ...”
“ ဘာ ကေ့စ်တွေလဲ...”
“ များသောအားဖြင့် ရိုက်မှု..ဒါးထိုးမှု တွေပါဘဲ ..အဲ..မှောင်ရိပ်ခိုမှု ရောပေါ့ ..”
“ အင်း..ခင်ဗျား အလုပ် လိုချင်ရင်တော့ ကျနော် ပေးနိုင်တယ် ..ကျနော်လဲ လူလိုနေတာဘဲ ..”
“ ဘာလုပ်ရမလဲ ..”
“ ကျနော် ခရီးထွက်တဲ့အခါ ကားမောင်းဖို့..၀ိုင်းလုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာ..တခါတခါလဲ ဟိုတညကလို ဖိုက်တင်တွေပါတွေ
ပလေး ချင် ပလေးရမှာပေါ့ ..ဟားဟား....”
“အင်း..စိတ်ဝင်စားတယ် ...လုပ်ကြည့်မယ် လေ ..”
“ အိုကေ ...လစာ ဒီလောက်ပေးမယ်..နေစရာ အပြင်ပေါ့ ..”
ဖြိုးမောက်က လက်သုံးချောင်း ထောင်ပြသည်။
“ ပုလင်းလား..ပုန်းလား ..ကိုဖြိုးမောက် ..”
“ သုံး ပုန်း ..”
“ အိုကေလေ ..လုပ်မယ် ..ဘယ်တော့ စရမလဲ ..”
“ စဆို အခုဘဲ..ကိုမဲဇာမှာ အခု ဘာလုပ်စရာ မပြတ်တာတွေ ဘာတွေ ရှိလဲ ..”
“ မရှိဘူး ..ကျနော်က တကောင်ကြွက်..အ၀တ်အထည်ကိုယ်တခုဘဲ ..ထ လိုက်ရုံဘဲ ..စောစောက ဘိုက်ဆာ
လွန်းလို့ သေခါနီးဘဲ..ကိုဖြိုးမောက် ကျွေးလိုက်လို့ အိုကေမှာ စိုပြေသွားပြီလေ ..”
မဲဇာကို အခု ကြည့်တော့လဲ ပြုံး ပြုံး အေးအေးနဲ့။ ဟိုညက ဖိုက်တာတော့ လက်က တအား သွက်သည်။
လက်သံပြောင်သည်။ တကယ့် ဖိုက်တာဘဲ။
မိုးစက်ဖြူသည်ကိုကိုကြီးကိုဖြိုးမောက်နဲ့ ကြိုက်နေတဲ့ မိသော်ကို ကြည့်လို့မရဘူး။
ကိုကိုကြီးက ဘာလို့များ ဒီလို ဆော်ကို အသဲအသန် ကြွေနေသလဲ မသိဘူး။ မိုးစက် လဲကိုကိုကြီးက သူ့ဆော်
ထိရင် မကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိလို့ကိုကိုကြီးနဲ့ မညိချင်လို့ ဘာမှ ၀င်မပြောတာ ..။ ဒီ မိသော် ဆိုတဲ့ ဆော်က ပိုင်း
လုံး ..ငရိပ်မ ဆိုတာ သိသည်။ မြင်တာနဲ့ သိသည်။
ဒက်ဒီ..မာမီ တို့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ကိုကိုကြီးကဘဲ မိုးစက်ကို အစစ စောင့်ရှောက် ကြည့်
ရှု ခဲ့သည်။ကိုကိုကြီးက မိုးစက်ကို အရမ်းချစ်..ဂရုစိုက် သလို မိုးစက် မသင့်တော်တဲ့ လူနဲ့ ကြိုက်သွားမှာကို
လဲ စိုးသည်။ မိုးစက်ကို ကျောင်းမှာ လိုက်လိုက် စကားပြောတဲ့ကောင်တကောင်ကိုကိုကိုကြီး စိတ်တွေ ဆိုး..ဒေါသ
တွေ ထွက်ပြီး သူ့တပည့်တွေနဲ့ ရိုက်ခိုင်း လား မသိဘူး။ ဒီကောင်ကို နောက်နေ့တွေမှာ ပတ်တီးတွေ ဂျိုင်းထောက်
တွေနဲ့ တွေ့လိုက်ရသည်။ကိုကိုကြီး လက်ချက်ဘဲ ဖြစ်မည်။
မဲဇာကို ဗဟန်းက သူ့ခြံထဲမှာ မော်ကြီးတို့နဲ့ အတူ နေစေသည်။
ဒီလို ဖိုက်တာတယောက် လိုနေတာကြာပြီ။ သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေက သိတဲ့အတိုင်းဘဲ။
ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် တခု မှ မရှိဘူး။
ဥပဒေနဲ့ လွတ်ကင်းတာ တခု မှ မရှိဘူး။
မော်ကြီးတို့ လူစုနဲ့ မဲဇာကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ မော်ကြီး တို့နဲ့ မဲဇာ ချက်ချင်း ဘော်ဒါတွေ လို ခင်ခင်မင်မင်
ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့ မော်ကြီးက သူ့ညီဝမ်းကွဲလဲတော်ပြီး လူရင်းတယောက်မို့ သူ့အနား ကပ်လာပြီး ..“ကိုဖြိုး ..သူ့အ
ကြောင်း သေသေချာချာ သိလို့လား ..ဘက်ဂရောင်းလေး ဘာလေး ချက်အုံးနော ..” လို့ တိုးတိုး သတိပေးသည်။
မဲဇာက ..“ ကျနော်လဲ လူလိုသူလို နေစရာ အခန်းနဲ့ ဘာနဲ့ ဖြစ်လာပြီ..ကဲ...ကိုဖြိုးမောက် ..ခင်ဗျားမှာ ခိုင်းစရာ ရှိရင်
ပြောပေတော့ ..ဘယ်သူ့ကို သိပ်ပေးရမလဲ..နှိပ်ပေးရမလဲ ..” လို့ ရယ်မောကာ ပြောသည်။ ဖြိုးမောက် က..“ကိုမဲ
ဇာ ..ကျနော်က လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် တို့လို လူမိုက် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ...စီးပွားရေးသမားပါ...ကိုယ့်ကို လာစော်ကား
မှ..ကိုယ့် စည်းထဲကို ၀င်လာမှ ထ ဖိုက်တဲ့ လူစား ..ဖြေးဖြေးပေါ့ ..လိုအပ်လာရင်ကိုမဲဇာကို ပြောပါမယ် ...” လို့
ဖြိုးမောက်သည် ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ မဲဇာကို အလုပ်ပေးလိုက်ပြီးနောက် မဲဇာ ပြောတာတွေ မှန်မမှန်ကို စစ်ကြည့်လိုတာကြောင့် မဲဇာကို ခြံထဲ ထားခဲ့ပြီးနောက် တရားရုံးကိုသွားလိုက်သည်။ တရားရုံး မှာသူ့လူပိုင်တယောက် ရှိသည်။ သူ့ကို လိုအပ်တာတွေ စုံစမ်းပေး နေကျလူ။ မဲဇာရဲ့ နောက်ကြောင်းကို စုံစမ်းခိုင်းလိုက်သည်။ တရားရုံးတွေမှာ ဘာ ရက်ကော့ ရှိသလဲ..။ ထောင်ကျဘူး တဲ့ ရက်ကော့..ရဲမှာ အဖမ်း ခံရတဲ့ ရက်ကော့။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညီမလေး မိုးစက်ဖြူ တယောက် မွေးထားတဲ့ ရွှေငါးတွေနဲ့ အလုပ် ရှုပ်နေသည်။ ညီမလေးသည် အသက်၂၀ ရှိပေမဲ့ ကလေးမလေး တယောက် လို အမူအရာ လုပ်နေသေးသည်။
“ကိုကိုကြီး..မိုးစက်ရဲ့ ဒီ ငါး အမဲကြီးက တဖြေးဖြေးနဲ့ အရောင်ပြောင်းသွားတယ် ..သိလား ..ဟိ..မိုးစက် လဲ
သူ့ကို မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် လို့ နံမည်ပေးထားတယ် ..အမဲကနေ အဖြူ ဖြစ်သွားလို့လေ ..အော်..ဒါနဲ့ကိုကိုကြီး
ရဲ့ မိသော် စောစောက ဖုန်းဆက်တယ် ..”
“ ဘာ ..မိုးစက်..ဘာလို့ကိုကြီးကို ချက်ချင်း မပြောလဲ ...ဘာတဲ့လဲ..မိသော်က ဘာပြောလဲ . .”
“ မိသော် ကကိုကိုကြီး သူ့ကို ဖုန်း ပြန်ဆက် ပါ...တဲ့...”
ဖြိုးမောက် မိုးစက် အနား ဖုန်းမပြောချင်တာနဲ့ အိမ်ရှေ့ကို ထွက်သွားပြီး ဖုန်းဆက်သည်။
“ မိသော် ...”
“ကိုဖြိုး ..၀ှပ်ဆပ်ပ် ...“
“ မိသော် . .ဘယ်ရောက်နေလဲ..ဖုန်းလဲ ခေါ်လို့မရ ..ကိုယ့်ကို ဘယ်သွားမယ် ဆိုတာတော့ ပြောသင့်တယ် ..”
“ ဆောရီးဘဲကိုဖြိုး..အဒေါ်တယောက်နဲ့ ပုသိမ်ဘက် လိုက်သွားရလို့ ...”
“ ပုသိမ် ...မိသော်မှာ ပုသိမ်ဘက်မှာ အဒေါ်ရှိတယ်လို့ မကြားမိပါလား ..”
“ ရှိတယ် ..အမေဘက်က ..ကိုဖြိုး . .”
ဖြိုးမောက် မိသော် ပြောတာကို မယုံဘူး။
သူ့ကို ညာနေ တယ် ..လို့ ထင်နေသည်။ မိသော်ကို စောင့်ကြည့်ဖို့လိုနေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်သည်။
“ မော်ကြီး ..ငါ့ဆီ အမြန်လာခဲ့ ..”
“ ဟုတ်..ကိုဖြိုး. .”
မော်ကြီးကို မိသော်ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ တာဝန်ပေးသည်။ ငါ့ဆော်ကို မင်း နောက်ယောင်ခံလိုက်ကြည့်စမ်း..
မော်ကြီး ..မသိသာစေနဲ့နော် ..မိသော် ဘယ်သွားလဲ..ဘာလုပ်လဲ ..အကုန်သိချင်တယ် ...”
“ ဟုတ်ကိုဖြိုး ..”
ဖြိုးမောက် မိသော် ဆီကို အမြန်ဆုံး သွားလိုက်သည်။
မိသော် သူ့ကို တပတ်လောက် အဆက်အသွယ် မလုပ်ဘဲ ပျောက်နေလို့။
သူ့ခြံထဲက ကားကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းထွက် သွားသည်။ မိုးစက် အိမ်အပေါ်ထပ် ပြူတင်းပေါက်ကနေကိုကို
ကြီး ကား တအားမောင်းထွက်သွားတာ တွေ့လိုက်သည်....။
မိသော် နေတဲ့ တိုက်ခန်းက ဖြိုးမောက် နေနေတဲ့ နေရာနဲ့တော်တော် ဝေးသည်။ လမ်းမှာ ကားတွေ ပိတ်နေသည်။
ဖြိုးမောက် ကားတန်းကြီး ကြားထဲ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေသည်။ ခုနောက်ပိုင်း
ရန်ကုန်မှာ ကားတွေ အရမ်းများလာသည်။ နေရာတကာမှာ လမ်းတွေ ပိတ်ကျပ်နေသည်။ ကားတွေက စည်းကမ်း
မရှိဘဲ ဟိုကထိုး..ဒီကတိုးနဲ့ ကြာတော့ ဖြိုးမောက် စိတ်တွေ တိုလာသည်။ ဒီအတိုင်း ဆိုရင် မိသော်ဆီကို နောက်
တနာရီနဲ့တောင် ရောက်မယ် မထင်ဘူး။ အမြန်လိုမှ အနှေးဖြစ်နေသည်။
ထိုအခိုက် ထောင်း ဆိုတဲ့ အသံကြီး ကြားလိုက်ရပြီး သူ့ကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားသည်။
အိုး ..သူ့ကားကို အနောက်က ကားက ၀င်ဆောင့်လိုက်တာ။
သူ့ကားက ၀ယ်တာ မကြာသေး။ ဟိုတလောက မှ သွင်းလာတဲ့ ကား။
သူ နောက်ကြည့်မှန်က ကြည့်တော့ ကားသေးသေးလေးတစီး ..ကို အနောက်မှာ တွေ့ရသည်။ တံခါးဖွင့် ဆင်း
လိုက်သည်။ ကားအသေးစားလေး တစီးက သူ့ကားကို အနောက်က တိုက်မိတာ။
ကားလေးက မတ်စတပ်ရဲလိုး အ၀ါရောင် တောက်တောက် စမတ် ဆိုတဲ့ တံခါးနှစ်ပေါက် စ၀ပ်နာရီ ထုတ်တဲ့ ကန်ပနီ
နဲ့ မာစီဒီး ကန်ပနီပေါင်းထုတ်ထားတဲ့ ကားပေါက်စလေး။
သူ့ကားဘန်ပါ နဲနဲ ဆေးပွန်း သွားသည်။ ကားအ၀ါလေး ဆီကို သူ ဒေါသပါတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရောက်သွားသည်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ဒေါသက ချက်ချင်း နတ်သား..နတ်သမီးတွေက ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ တို့လိုက်တဲ့အခါ ရုတ်ချည်း ကွယ်
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ နောက်က တိုက်တဲ့ စမတ်ကားပုလေးရဲ့ ကားမောင်းသူကြောင့်ပါဘဲ။
ကားမောင်းတဲ့ လူသတ္တ၀ါသည် အင်မတန်မှ ချောလှလွန်းတဲ့ ကောင်မလေး တယောက် ဖြစ်နေလို့။
လူတွေကလဲ အခက်သား။ ယောင်္ကျားသား ဒရိုင်ဘာတယောက် သာ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ဟောက်ထည့်မလို့။
အခုဟာက အရမ်းအရမ်းကို မိုက်တဲ့ လန်းတဲ့ နုထွက်ဖေါင်းတင်းနေတဲ့ ကောင်မလေး ဖြစ်နေသည်။ ဖြစ်နေရုံ
မက ကောင်မလေးသည် ပြုံးပြနေသည်။
မေတ္တာ လာရင် မေတ္တာ ပြန်သွား တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝ ...။
အပြုံးနဲ့ လာတော့ သူလဲ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်သွားသည် . .။
“ ညီမ ..”
“ ဟုတ်..အကို..ဆောရီး အင်္သချေဘဲ..ရွေး ..အကို့ကားကို တိုက်မိသွား တယ် ..ရွေး ပြန်ပြင်ပေးပါမယ်..အကို ..ရွေး
အပြစ်ပါ..ခွင့်လွှတ်ပါ အကို ..”
ဒီလို ချောလွန်းတဲ့ ကောင်မလေး မဟုတ်ဘဲဘဲတကောင် သာဆိုရင် ..“ ပြန်ပြင်လို့ရတာတော့ မင်းပြောမှလား ..ဆေး
ပြန်မှုတ်ရင် ဆေးရောင် ဘယ် တူတော့မလဲ ...” ဘာညာနဲ့ သူ ဟောက်မှာ။
အခုတော့ ရွေး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက မှုံနေအောင် ချောတယ် ဆိုတာမျိုး။ ဖြိုးမောက် ကြွေသွားသည်။
မြေခကြွေကျသည် ဆိုတာမျိုး။ သွားကြီး ဖြဲပြီး....“ ရပါတယ်..ရပါတယ် . . ” ပြောပြီး ရွေး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ငေးမောနေမိသည်။
“ အကို..ဒီမှာ . .ရွေးရဲ့ လိပ်စာကပ် ..ဖုန်းနံပါတ်လဲ ပါတယ် ..အကို့လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လဲ ပေးလေ ..ရွေး အကို့
ကို ဆက်သွယ်ဖို့ .. အကို့ကားကို ရွေး တာဝန်ယူ ပြင်ပေးမယ် . .”
ရွေး ကပ်ပြားလေးကို သူ လှမ်း ယူလိုက်ပြီး သူ့ဆိုင် ကပ်ပြားကို ရွေးကို ပေးသည်။
ရွေးရဲ့ ကပ်ပြားလေးက ...“ ရွှေ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ ” တဲ့။
သူ သိသည်။ ညီမလေး မိုးစက်သည် မုန့်ဆိုင်က ၀ယ်ဝယ်စားတတ်တာ မှတ်မိသည်။ သူ့ကို တခါတလေ မှာ
တတ်လို့ သူ ရောက်ဖူးသည်။ ရွှေချီဆနွင်းမကင်း ..ငှက်ပျောပေါင်း ..ကျောက်ကျော ..ထိုးမုန့်..မလိုင် ကရေကရာ
ကနေပြီး ဘိန်းမုန့် ..မုန့်ဖက်ထုပ် ..မုန့်စိမ်းပေါင်း ထိ အစုံရောင်းသည်။ လူတွေ ကျိတ်ကျိတ် တိုးနေအောင် ရောင်း
အော်.. ရွေးက ဒီဆိုင်ကကိုး . .။
“ ရွေး အကို့ကို ဖုန်းခေါ်မယ် နော် ..ခုတော့ အရေးတကြီး မို့ ..နောက်မှ..”
ရွေးကို သူ ပြုံးပြပြီး သူ့ကားဆီ ပြန်ခဲ့သည်။
မိသော် ဆီ သွားဖို့ ကိစ္စတောင် စိတ်သိပ်မပါတော့ဘူး။
ရွေးက မိသော် အစား သူ့ခေါင်းထဲမှာ နေရာယူသွားပြီ။
နံမည် အပြည့်အစုံလေးတောင် မသိလိုက်ရဘူး . .။
အင်မတန်မိုက်တဲ့ ရွေးနဲ့ သိခွင့်ရတာကြောင့် သူ့ကား ဘန်ပါ နာသွားတာတောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။
ဖြိုးမောက် ရှေ့က မီးပွိုင့် ကျရင် နောက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး အိမ်ကို ပြန်တော့မည် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဖြိုးမောက် သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ ထိုင်နေသည်။ စွပ်ကျယ် လက်ပြတ် ၀တ်ထားလို့ ကြွက်သား အဖုအထစ်တွေနဲ့
ဖြိုးမောက်ရဲ့ လက်မောင်းသားကြီးတွေကို တွေ့နေရသည်။ ဖြိုးမောက် သူ့ပစ္စည်းတချို့ အဖမ်းခံရလို့ ဒေါပွ
နေသည်။ သူ့တပည့်တွေရဲ့ အပြစ် မဟုတ်ဘူး။ မဆိုင်တဲ့ ကောင်တွေ ၀င်နှိပ်သွားတာ။
ဖြိုးမောက်က ဖမ်းဆီးတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဆက်ကြေးပေးထားပြီးသား။
ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ထင်ထားလို့ မပူမပင် ရောင်းကြ ၀ယ်ကြတာ ..မဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့တခုက ၀င်ဖမ်းသွားသည်။
ခက်တာက သူ အားကိုးရတဲ့ တပည့်တယောက် အထဲ ၀င်သွားသည်။ ပစ္စည်းတွေနဲ့ လက် ၀ယ်မိ တာ ဆိုတော့
ခက်နေသည်။ ဖြိုးမောက် သူ့အားကိုးရာ အဆက်အသွယ်ကို ဖုန်းဆက် ပြောပြ နေသည်။
“ကိုထက် ..ပစ္စည်းတွေ ဆုံးတာက ကိစ္စ မရှိဘူးဗျ .. ကျနော့်ကောင်လေး ..က အဓိက ..သူ့ကို ပြန်ထုတ်ချင်တယ် ..
ကိုထက် ကြည့်ကျက် လုပ်ပေးပါအုံး … ”
“ကိုဖြိုးမောက် ..နဲနဲတော့ ခက်တယ်ဗျာ..ကျနော် ကြိုးစားပေးမယ် ..ခင်ဗျားက မနိုင်ရင်ကာ ဖြစ်နေလို့ ..လုပ်ပေးရ
မှာပေါ့..ကဲ..ကျနော် လုပ်လိုက်အုံးမယ် ..စိတ်မပူပါနဲ့..အဆင်ပြေသွားမှာ ပါ . .”
“ ကျေးဇူးဘဲ..ကိုထက် ..အားကိုးပါတယ်...”
ဖုန်းချလိုက်ပြီးနောက် သူ ဘာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ စဉ်းစားနေသည်။ကိုထက်ကို သူ ကူညီထားတာတွေ သိပ်များ
ခဲ့လို့ကိုထက် ..သူ့တပည့်လေး မိုက်ကယ်ကို မရရအောင် ထုတ်ပေး မှာဘဲ။
မော်ကြီး အခန်းတံခါးခေါက်ပြီး ၀င်လာသည်။
“ကိုဖြိုး ..ခဏ လာလို့ရမလား ..”
“ လာ..မော်ကြီး ...ဘာထူးလဲ . .”
မော်ကြီးကို မိသော်ကို နောက်ယောင်ခံ လိုက်ခိုင်းထားသည်။ မော်ကြီး မျက်နှာ မကောင်းဘူး။
“ ပြော..မော်ကြီး ...”
“ ကျနော် သော်သော်ဝင်းတင့် နောက်ကို လိုက်တယ်..ကိုဖြိုး ..မစွံဘူး ..ကိုဖြိုး စိတ်တော့ မရှိနဲ့..သော်သော်ဝင်းတင့်
ကိုဖြိုးမသိအောင် လူတယောက်နဲ့ ရှုပ်နေတယ် . .”
“ ဘယ်သူလဲ..ဘယ်က ကောင်လဲ ..”
“ ဓနအောင်မြင်...တဲ့..ကိုဖြိုးလဲ ကြားဖူးမှာပေါ့ ..ဓန ဆောက်လုပ်ရေး..တို့ ...ဓန ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရေး တို့ ..”
“ တောက် ..မိသော်တော်တော့်ကို စောက်သုံးမကျတဲ့ ကောင်မ ...ခွေးမ ...”
သော်သော်ဝင်းတင့် ဖြိုးမောက် သူမ.ကို စိတ်ဆိုးနေတာ သိလို့ ဖြိုးမောက်ကို ဘယ်လို စိတ်ပြေအောင် ချော့ရမ
လဲ စဉ်းစားနေသည်။ ဖြိုးမောက်နဲ့တွေ့ပြီး ရီးစားဖြစ်ပြီးနောက် သော်သော်ဝင်းတင့်လဲ ဦးဓနအောင်မြင်နဲ့ ဆုံ
သော်သော်ဝင်းတင့် ဦးဓနအောင်မြင်ကို ကြွေသွားသည်။ ဦးဓနအောင်မြင်သည် အသားဖြူဖြူ ရုပ်
ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး။ လူတွေက ချမ်းသာလာရင် အဆီထူ ၀ဖြိုး လာကြသည်။ များသောအားဖြင့်
ဘောစိတွေသည် ခပ်ဝဖိုင့်ဖိုင့် တွေဘဲ။ ဓနအောင်မြင် ကတော့ အဲလို မဟုတ်ဘူး။ မြင့်မားတဲ့ အရပ်နဲ့
ဘိုက်ချပ်ချပ်နဲ့ ကျန်းမာရေး လိုက်စား သူ ဖြစ်သည်။ မင်းသားကြီးဦးနေအောင် ငယ်ငယ်က ရုပ်နဲ့ ဆင်သည်။
ဦးဓနအောင်မြင် ကလဲ သော်သော်ဝင်းတင့်ကို စိတ်ဝင်စားသည်။ ဓနအောင်မြင်က မိန်းမနဲ့ ကွဲနေတာ
တနှစ်ကျော်ကျော် ရှိနေပြီ။ သူ့မိန်းမ ဒေါက်တာ ရီတာညိုဝင်းကို ကွဲတော့ သူ တိုက်နဲ့ ခြံရော..ငွေသား လဲ
ကျပ်ကုဋေချီပြီး ပေးလိုက်ခဲ့ရပေမဲ့ ဓနအောင်မြင်သည် နံမည်နဲ့ လိုက်အောင် ငွေရှာနိုင်သူ တယောက် ဖြစ်လို့
သော်သော်ဝင်းတင့်သည် ဖြိုးမောက်နဲ့ ဓနအောင်မြင်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့ ဖြိုးမောက်သည် ချမ်းသာပေမဲ့
မကောင်းမှု ဒုစရိုက် လုပ်နေသူ..တနည်းအားဖြင့် ထောင်နှုတ်ခမ်းလျောက်နေသူ ဖြစ်သည်။ ဖြိုးမောက် အတွင်းရေးတွေကို ဖြိုးမောက်နဲ့ ကြာကြာအတူတူ တွဲလာတော့ သူမ သိလာရသည်။ ဖြိုးမောက်သည် ရန်ကုန် တ၀ိုက်မှာ ရာဘ တို့ ဟီးရိုးအင်းတို့ ဖြန့်နေတဲ့ လူ ..ဆိုတာ မိသော် သိလာသည်။ မိသော်သည် လူပေါင်းစုံနဲ့ ခင်တာကြောင့်လဲ သိလာတာ။
ဓနအောင်မြင် ကတော့ ခေါင်းသုံးပြီး အပေါင်းအသင်း အားကိုးနဲ့ စီးပွားရှာနေသူ တယောက် ဖြစ်သည်။
ဖြိုးမောက်က အချိန်မရွေး ထောင်ထဲ ၀င်သွားနိုင်သည်။ စိတ်မချရ။ နောက်တခု သော်သော်ဝင်းတင့် မကြိုက်တာက ဖြိုးမောက်သည် ဘရိန်းသိပ်မပြေးဘူး သူမ ထင်သည်။ ဒေါသကြီးသလို ထင်ရာစွတ် လုပ်တတ်သူ မို့ တနေ့နေ့ ဒီကောင် ဒုက္ခရောက်မှာ သေချာသလောက်ဘဲ ...။
ဓနအောင်မြင် ခေါ်သွားတဲ့ ဒင်နာ ညစာပွဲတွေကို သော်သော်ဝင်းတင့် လိုက်သွားရင်း ဓနအောင်မြင်ရဲ့ ကြီးပွား
ချမ်းသာတာတွေကို ပိုပို သိလာရလေ ဖြိုးမောက်ကို ခွာချင်လေ ဖြစ်လာသည်...။ သို့ပေမဲ့ သော်သော်ဝင်းတင့်
ဖြိုးမောက်ကို နဲနဲ လန့်သည်။ ဖြိုးမောက်က လူမိုက်။ လူမိုက်တောင် ရိုးရိုး လူမိုက် မဟုတ်ဘူး။ လူမိုက်
အကြီးစား ...။ ဂိုဏ်းစတား ..ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်။
သော်သော်ဝင်းတင့်နဲ့ ဖြိုးမောက်သည် ရီစား မက လင်မယား..လစ်ဗင်းတူဂဲသား အဆင့်လို ဖြစ်ခဲ့လို့သာ သူ့လှို့ဝှက်ချက်တော်တော်များများကို သော်သော်ဝင်းတင့် သိလာခဲ့ရတာ ဖြစ်သည်။ ဖြိုးမောက်မှာ သေနတ်လက်နက်တွေ ရှိတာလဲ သော်သော်ဝင်းတင့် သိလာသည်။ ဥပဒေ ချိုးဖေါက်နေတဲ့ လူမို့ ..တနေ့ ရဲအဖွဲ့နဲ့ ညိကြမှာ မို့ ဒီ အရှုပ်ထုပ်တွေထဲ သူမ မပါလိုတော့ဘူး။
ဓနအောင်မြင်က သူမကို တရားဝင် မယူဘဲ ကီပင် အဖြစ် တင့်တောင့်တင့်တယ် ထားမည် ဆိုရင်တောင် သူမ ကျေနပ်သည်။ ဓနအောင်မြင်ရဲ့ အဆက်အသွယ်တွေ ကလဲ အရမ်း ဖလန်းလန်းဘဲ ဆိုတော့ သူမသည်လဲ အရင့်
အရင်က စပွန်ဆာကောင်း မိသွားတဲ့ ယနေ့ နံမည်ကြီးနေသော မော်ဒယ်ဂဲတို့ မင်းသမီးတို့လို တခုခုတော့
နံမည်ကြီး လာမယ် ဆိုတာ ယုံကြည်သည်။ အနာခံ မှ အသာစံရမည် ဆိုတာကို သဘောပေါက်သည်။
လောကကြီးမှာ အလကား ဘာမှ မ၇နိုင်ဘူး ...လို့ သဘောပေါက်ထား..သိထားသည်။ တစုံတခုကို လိုချင်ရင်
တစုံတခုကို ပေးဆပ်ရမည် မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် သော်သော်ဝင်းတင့်သည် ဓနအောင်မြင်ကို ရွေးချယ်လိုက်သည်.။ ဓနအောင်မြင် ခေါ်ရင် မငြင်း။
ဓနအောင်မြင်က ချောင်းသာ ကမ်းခြေမှာ သူ ၀ယ်လိုက်တဲ့ ဟိုတယ်ကို သွားကြည့်စရာ ရှိနေလို့ သော်သော်
မရောက်ဘူးရင် လိုက်ခဲ့ပါလား ဖိတ်ခေါ်တော့ မငြင်းတော့။ ဓနအောင်မြင်ရဲ့ လင်းကရူဆာ ကားအသစ်ကြီး
နဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေကို လိုက်ပါသွားလေတော့သည်။ မိသော်တယောက် စွန့်စားပြီ။ ဖြိုးမောက် လက်ကနေ
ဓနအောင်မြင် လက်ကို ကူးဖို့ ခုန်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။
လေအေးစက် ဖွင့်ထားတဲ့ ကားသစ်ကြီးထဲ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း သက်သက်သာသာ လိုက်ပါရင်း..ဓနအောင်မြင်
ရဲ့ သာမန်လူတွေ အတွက် အံ့မခန်း ဖြစ်စေမဲ့ ချမ်းသာ မှု အတွေ့အကြုံ ဇာတ်လမ်း မျိုးစုံကို နားထောင်ရသည်။
ပုသိမ်မြို့အ၀င်နားက ခခကြီး ထမင်းဆိုင်မှာ ခဏ ထမင်းဝင်စားသည်။ သူဌေး တယောက်နဲ့ ခရီးသွားတော့ စားတာသောက်တာလဲ ဟင်းတွေက မျိုးစုံဘဲ။ ဓနအောင်မြင်က ဒီလောက် အစားမပုတ်ဘူး။ မိသော်ကို ကျွေးချင်
တာ..။ မိသော်ကလဲ အစားကြိုက်ပေမဲ့ အရမ်းကာရော စားလို့ မဖြစ်ဘူး လေ..။ တော်ကြာ ၀တုတ်ကြီး ဖြစ်လာရင်
ဘယ်သူ မှ ကြိုက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဖြိုးမောက် တယောက် သူမကို လိုက်ရှာနေတော့မည် ဆိုတာတော့ သိနေသည်။ ဘာတတ်နိုင်မလဲ။ သူ့
ထက်သာတဲ့လူတွေ့တော့လဲ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရွှေ့ရမှာပေါ့။ မိသော် ရန်ကုန် တက်လာကထဲက ကြီး
ပွားချင်လို့..။ နံမည်ကြီး ချင်လို့။
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ကြည့်ရမှာဘဲ။ အစထဲက စိတ်ထဲက ဖြိုးမောက်ကို ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဆီက ရ
သမျှ ရိပ်ချင်လို့ သူ့ကို ချစ်ဟန်ဆောင် ..ကိုယ်နဲ့ ရင်းခဲ့တာဘဲ။
အခုလဲ ဓနအောင်မြင်ကို ရှိတာလေး ထိုးကျွေးပြီး ရင်းကြည့်အုံးမည်။
ချောင်းသာ ကမ်းခြေက ဟိုတယ် ကြီး တခုရဲ့ အခန်း ထဲ။
ိ မိသော်သည် ရေထဲ ဆင်းဖို့ အ၀တ်အစား လဲနေသည်။
ဓနအောင်မြင် ခေါ်သွားတဲ့ ဟိုတယ်က အရမ်းဈေးကြီး တယ် ဆိုတာ သိသည်။ အရင်က ဆိုရင် ဖြိုးမောက်
နဲ့တောင် ဒီလို ဟိုတယ် မျိုး မတည်းနိုင်ဘူး။ ဓနအောင်မြင်က မိသော် အပေါ် ရက်ရောသည်။ မိသော်ကို
ဖြိုးမောက် ၀ယ်ပေးတာတွေ ထက် ပိုတန်ဖိုးကြီးတာတွေ ၀ယ်ပေးသည်။
ဓနအောင်မြင်က အပေးကမ်း ရက်ရော သလို မိသော်ဖက်ကလဲ မိသော်မှာ ရှိတာတွေကို သူ့ကို ရက်ရက်
ရောရော ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဘဲ လေ။
မိသော် နှစ်လွှာ ဘီကီနီ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေသည်..။
သူမကိုယ်ကို သူမ မှန်ထဲ လှည့်ပတ်ခါ ကြည့်နေသည်။ တံခါးခေါက်သံကြားသည်။
“ သော်သော် ..ခဏ ..”
မိသော် တံခါးပြေး ဖွင့်ပေးသည်။
“ အိုး..ဟိုးဟိုး ..မိုက်လှချည်လား..သော်သော် ရယ် . . ”
“ ဒါကိုဓန စင်္ကာပူက ၀ယ်လာပေးတာလေ ...”
“ သော်သော်နဲ့ ဖစ်ဘဲ ..၀ှူး..လှလိုက်တာ ...”
ဓနအောင်မြင်က မိသော်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်သည်။ အနောက်ကို ကော့ထွက်နေတဲ့ တင်သားတွေ
ကို သေသေချာချာ ကြည့်သည်။
“အို ..ကိုဓန ကလဲ .ရှက်တောင်လာပြီ . .”
ဓနအောင်မြင်က မိသော် အခန်းကို အထဲက ဂျက်ချပိတ်လိုက်ပြီး ..“ သော်သော်ကိုယ်တော့ ရေထဲ မဆင်း
ချင်တော့ဘူး ..သော်သော်နဲ့ဘဲ ဒီအခန်းထဲမှာ နေတော့မယ်ကွာ ...” လို့ ပြောပြီး မိသော်ကို ဖက်လိုက်သည်။
ဓနအောင်မြင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးတွေက မိသော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေးတွေကို ငုံစုတ်ပြီ။
မိသော်လဲ ဓနအောင်မြင်ကို တအားပြန်ဖက်သည်။ ဓနအောင်မြင်ရဲ့ လက်တွေက မိသော် တင်ပါးတွေကို
ပွတ်သည်။ကိုင်သည်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဆုတ်နယ် ဖျစ်ညှစ်လာသည်။ မိသော်ရဲ့ ဘီကီနီ အပ်ါပိုင်း
လေး အရင်ဆုံး မိသော်ကိုယ်ပေါ်က ပြုတ်ကျ သွားသည်။
အိုး။ မိသော်ရဲ့ ရင်သားတွေ အကာအကွယ် မဲ့သွားလို့ လား..ဓနအောင်မြင် လက်ကစားလို့ လား မသိဘူး။
တုန်ခါနေကြသည်။ မိသော် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ရီ နေသလို မိသော် ပေါင်ကြားက နှုတ်ခမ်း
လေးတွေလဲ စိုစိုရွှဲနေကြပြီ။ မိသော် အင်္ဂါစပ်သည် အတွင်းထဲက တစုံတရာကို တောင်းဆိုနေသည်။
တအားယားပြီး တခုခုကို လိုချင်နေသလိုကြီး။
ဓနအောင်မြင် ၀တ်ထားတဲ့ ရေကူးဘောင်းဘီ အတိုလေး ရှေ့က ရှည်မျောမျောကြီး ထိုးထောင် ထနေတာ မိသော်
တွေ့ရသည်။ ဓနအောင်မြင်က မိသော် ရှေ့မှာ ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဘီကီနီ အောက်ပိုင်း လေးကို
ချွတ်သည်။ အိုး ...။ အမွှေးအမြင် ရိပ်သင်ထားတဲ့ မိသော်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သူ သေသေချာချာ ကြည့်နေသည်။ “ကိုဓန ..ဘာကြည့်နေတာလဲ လို့ . . ”
“ သော်သော့်ရဲ့ ပန်းပွင့်လေးကိုကိုယ် သဘောကျလို့ ..”
“ သဘောကျတော့ ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် . . ”
“ နမ်းမလို့..အနမ်းတွေ ပေးမလို့ သော်သော် . .”
“ကိုဓနရယ် ..အားနာစရာကြီး ..ကောင်းပါ့မလား ...ဖုန်းကံနိမ့် ကုန်ပါ့မယ် ..”
“အိုး..ကိုယ် ဒါတွေ ဂရုမစိုက်ဘူး ..သော်သော့် ပန်းပွင့်လေးကို နမ်းမှာဘဲ ..လာ..ကုတင်ပေါ်သွားစို့ . .”
ဓနအောင်မြင်လဲ မိသော်ကို ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန်အိပ်စေပြီး ပေါင်တန်တွေကို ဖြဲကားလိုက်သည်။
“ အို . .ကိုဓန ..သော်သော် ရှက်တယ် .. ”
မိသော် ဟန်ဆောင် ရှက်ပြသည်။
မိသော်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သူ့လျာကြီးနဲ့ တပြတ်ပြတ် ယက်ပါတော့သည်။
မိသော်သည် ဖြိုးမောက်နဲ့ ဓနအောင်မြင်ကို အမြဲ နှိုင်းယှဉ်နေမိတော့ ဘာဂျာမှုတ်တာမှာလဲ ဓနအောင်မြင်
မှုတ်ပေးတာက ပိုကောင်းသည် လို့ မိသော် ထင်သည်။
မိသော် သာရင် ကူးတဲ့ သာကူး လုပ်ဖို့ စဉ်စားနေပြီ။
ဖြိုးမောက် ဒီနေ့ မြို့ထဲက ဆိုင်ကို သွားရင်း ခြံထဲမှာ မဲဇာကို ၀င်ခေါ်သည်။ မဲဇာသည်ကိုဒါဝတ် ဖြစ်နေသည်။ ဒါဘဲ ၀တ်ဝတ် နေလို့..ဒါ ၀တ် ဖြစ်နေတာ။ စုတ်ပြတ်နေတဲ့ ဂျင်းဝတ်စုံသည် .ညစ်ပတ် နံစော်နေသည် .။ လမ်းမှာ ကြုံတဲ့ ကုန်တိုက် တခုမှာ သူ ကားရပ်လိုက်ပြီး ..မဲဇာကို ငွေထုတ်ပေးပြီး အ၀တ်အစား ၀ယ်စေတော့.....မဲဇာ က“ကိုဖြိုးမောက် ..မတန်တော့တဲ့..မ၀တ်ချင်တဲ့ဟာတွေ ရှိရင် ကျနော့်ပေးပေါ့..ကျနော် ၀တ်မယ် ..ဟီး..ခင်ဗျား အ၀တ်တွေက အကောင်းစားတွေ...ဒီမှာ သွားဝယ်ရင် အပေါစားတွေဘဲ ရမယ် ..”လို့ပြောသည်။
“ ရတာပေါ့..ကျနော် အများကြီး ပေးနိုင်တယ် . .ဒါပေမဲ့ ..ကျနော်ဝတ်ပြီးသားတွေ မပေးချင်ပါဘူး .. ဆိုင်ကောင်းကောင်း ခေါ်သွားပေးမယ် ..”
မဲဇာကို စေတနာနဲ့ ၀ယ်ပေးဖို့ ကုန်တိုက် ထဲ သူ ကားမောင်း ၀င်လိုက်ပေမဲ့ သူက မလိုချင်ဘူး ဆိုလို့ နောက်မှဘဲ
သူ့အတွက် စဉ်းစားပေးမည် ဆိုပြီး ကုန်တိုက် ပါကင်ကွက် ထဲက ပြန်မောင်းထွက်မယ် အလုပ် ..စမတ်ကားဝါ၀ါလေး
ကို တွေ့လိုက်လို့ သူ ကားကို မမောင်းထွက်သေးဘဲ ကားလေးကို သေသေချာချာ ကြည့်သည်။ ဟုတ်သည်။ ဟိုနေ့က သူ့ကားအနောက်ကို လာဆောင့်တဲ့ ကားလေး ဘဲ.။
ကားထဲမှာ သူ ကြွေသွားရတဲ့ အရမ်းချောတဲ့ ရွေး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး မရှိ။ ကုန်တိုက်ပေါ်တက်သွားပုံရသည်။ သူ ကားကို ကားဝါလေး နားမှာ ပြန်ရပ်လိုက်တော့ မဲဇာက သူ့ကို နားမလည်သလို ကြည့်သည်။
“ ခဏလေးဗျာ..စာရင်းရှင်းစရာလေး ရှိလို့ ...”
“ ကျနော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုဖြိုးမောက် ..”
“ ဘာမှ လုပ်ပေးဖို့ မလိုဘူး ..စောင့်ဘဲ ကြည့် . . ”
အရမ်း ပူလွန်းလို့ နေပြင်းပြင်း ပူနေတဲ့ အချိန် ကားရပ်တဲ့ ပါကင်အကွက်ထဲ ကားထဲ ထိုင်စောင့်နေရတာ မလွယ်လှ
ဘူး။ ဖြိုးမောက်က ကားစက်ကို နှိုးလိုက်ပြီး အဲကွန်းကို ဖွင့်သည်။
ရွေးက ဘယ်တော့ ပြန်လာမယ်မှန်း မသိဘဲ စောင့်နေတာ။
မလာရင်ကော။ သူ့အိမ်သား တယောက်ယောက် မောင်းလာတာ ဖြစ်နေရင်ကော။
“ကိုမဲဇာ ..ဘိုက် ဆာပြီလား ..”
“ မဆာသေး ပါ ဘူး ..ကိုဖြိုးမောက် ..ကိုဖြိုးမောက် ကော ဆာပြီ လား . .”
“ ဆာတော့ ဆာပြီ ..ခဏတော့ စောင့် ကြည့် လိုက် အုံးမယ် . .”
ကုန်တိုက်ထဲက လူတွေ ထွက်လာနေသည် . .။
ဟော . .။
လာပြီ..။ ထွက်လာပြီ . .။
ရွေး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး။ သူ့ကားလေး အ ရောင်မျိုး မတ်စတတ် ရဲလိုး အ၀ါရောင် တောက်တောက် တီရှပ်နဲ့
စကပ် တိုတိုလေး။ အိုး။ ဖိနပ် ကလဲ ဒီအရောင်ဘဲ။ မပြီးသေး။ နားကပ်ရော..လက်ပွေ့အိတ်ရော ..အ၀ါရောင်
အ၀ါရောင် ကောင်မလေး တစ်တစ် ဆိုပြီး ကားလေးရဲ့ တံခါးကို ရီမုတ်နဲ့ ဖွင့်သည်။ ၀ယ်လာတာတွေကို ကားထဲ
ထည့်ပြီး ၀င်ထိုင်သည်။ ဖြိုးမောက် မြန်သည်။ ကားပေါ်က ဖြတ်ကနဲ ဆင်းလိုက်သည်။ ကားဝါလေးရဲ့ ဘေး
“ ဒီမှာ ..ခဏ ..စကားနဲနဲ ပြောလို့ ရမလား . .”
“ ဟာ..အကို ..ကိုဖြိုးမောက် ..ဟုတ်တယ်နော် . .ကိုဖြိုးမောက် . . ”
“ဟုတ်ပါ့ဗျာ ..ရွေး...နော် ..”
“ ဟုတ်...ရွေး ..ပါ..ခိခိ ...ကိုဖြိုးမောက်က မှတ်မိသားဘဲ . .”
“ မှတ်မိတာပေါ့ ..ကားပြင်ပေးမလေး ဘာလေးနဲ့ ဖုန်းလဲ မခေါ်..ပေါ်လဲ မလာ . .”
“ ဆောရီးပါ..အကိုရယ် ..ရွေး အလုပ်တွေ များနေလို့ပါ ..ရွေး ပြင်ပေး ပါမယ် . .”
“ အခု ရွေး တယောက်ထဲ လား ..”
“ ဟင့်အင်း ..နှစ်ယောက် ..သူငယ်ချင်းက ခုဘဲ ထွက်လာလိမ့်မယ် .. ဘာလို့မေးတာလဲ ..”
“ ကားပြင်မပေး..ဖုန်း မခေါ်တဲ့အတွက် ..ဒါဏ်ကြေး တပ်မလို့ ..”
“ ရှန်..ဘာရယ် ..”
“ရွေးက ဒို့ကို တခုခု လိုက်ကျွေးရမယ် ...”
“ အိုး..ရတာပေါ့..အကို့ကို တကယ်ဘဲ တောင်းပန်ပါတယ် ..ဘာစားမလဲ..ရွှေ မြန်မာ မုန့်မျိုးစုံမှာ စားမလား ..
အခု ပူတင်း ဖုတ်တယ် ..အကို စားကြည့် လျာလည်ချင် လည် ..မလည် ရင် ဆွေမျိုးမေ့သွားစေရမယ် ..”
“ ဟင့်အင်း ..အဲဒါက နောက် မှ စားမယ် .”
“ နောက်တာပါ..တကယ်လဲ ခေါ်သွားရဲပါဘူး . .မေမေ ဆဲနေမှဖြင့် . .”
ကုန်တိုက်ထဲက ရွေး သူငယ်ချင်း ထွက်လာပြီ။ အနီရဲရဲ တီရှပ်နဲ့ နီနီရဲရဲ စကပ်တိုတိုလေးနဲ့ ...။
ရွေးက သူ့သူငယ်ချင်း ကားနား ရောက်လာတော့ မိတ်ဆက်ပေးသည်။
“ ဒါ..ရွေး သူငယ်ချင်း ..မေစီမိုး ..”
“ မေစီ..ဒါ..ကိုဖြိုးမောက် … .”
“ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်..အကို ..”
“ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ..မေစီမိုး . .”
ရွေးနဲ့ မေစီမိုး တို့ သူတို့ စားနေကျ သောက်နေကျ ကော်ဖီဆိုင် လေး တခုမှာ ဖြိုးမောက်နဲ့ မဲဇာကို ကော်ဖီနဲ့ မုန့်
ကျွေးသည်။ အားလုံး ခင်မင်သွားကြသည်။ ရွေးက ဖြိုးမောက်ကို ကားပြင်ဖို့ သူမ အသိ ဘော်ဒီဆိုင်မှာ လိုက်အပ်ပေးသည်။ တကယ်တော့ ဖြိုးမောက်သည် ကားတကယ် ပြင်ချင်တာ မဟုတ်။ ရွေးနဲ့ တွေ့ချင်တာ။
ရွေးနဲ့ ခင်မင်ချင်တာ။ ရွေးနဲ့ မေစီမိုး တို့နဲ့ လမ်းခွဲအပြီး ဖြိုးမောက် က..“ ဘယ်လိုလဲ ..ကိုမဲဇာ ..မေစီမိုး ..
သဘောကျလား ...” လို့ မေးသည်။
“ မဆိုးပါဘူး ...” မဲဇာက ဖြေသည်။ ဖြိုးမောက် က..“ကိုမဲဇာ အသံကလဲ အားမရလိုက်တာ ..မေစီမိုးက ဒီလောက်
မိုက်တာကို . .” လို့ ပြောသည်။
“ကိုဖြိုးမောက်နဲ့ရွေး အဆင်ပြေဖို့ဘဲ အဓိက ပါ ..ဟဲဟဲ ..ကျနော်က ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ ..ဆိုက်ပတ်ပေါ့ ...”
“ ဟားဟား...ဆော်လေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးဖို့ ဆိုင်ထိုင်တာဗျာ..ဆာတုံးဘဲ ..တခုခု သွားစားရအောင်ကိုမဲဇာ...”
“ ဘယ်သွားမလဲ ..ကိုဖြိုးမောက် . .”
“ ရွှေဘဲ … .ရွှေဘဲ သွားမယ် ..”
“ အိုကေ ...”
နေ့လည်စာကို ရွှေဘဲမှာ စားကြသည်။
တခြားတပည့်တွေလဲ ရောက်လာလို့ အားလုံး စားကြသောက်ကြ ရင်း လူသစ် မဲဇာနဲ့လဲ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဖြိုးမောက်ရဲ့ တပည့်ရင်း ဆန်နီမောင်မှိန်က တာချီလိတ် ဘက် ခရီးလွန်နေလို့ မဲဇာနဲ့ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။
မဲဇာသည် အစားအသောက်တွေကို အငမ်းမရ စားသည်။ မော်ကြီးက သူ့ကို လက်တို့ပြီး ပြသည်။ မဲဇာသည် အစားစားတာ ပက်စက်သည် ..ရိုင်းသည် လို့ မော်ကြီးက ပြောသည်။
သူငတ်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် လို့ ဖြိုးမောက် တွေးပြီး ခွင့်လွှတ်ထားလိုက်သည်။ဘဲကင်ကို တကောင်နဲ့ မလောက်လို့နောက်တကောင် ထပ်မှာရသည်။ သူ့လူတွေထဲမှာ မဲဇာက အစား အပုတ်ဆုံးဘဲ။
မော်ကြီးတို့က မဲဇာ ရောက်လာတာကို ဘာမှ မနာလို မဖြစ်ကြပေမဲ့ ဆန်နီမောင်မှိန် ကတော့ ဖြစ်သည်။ မနာလိုဖြစ်သည်။ ဆန်နီမောင်မှိန်က ဖြိုးမောက်ကို နှစ်ကိုယ်ကြား စကားပြောသည် ..။ မဲဇာ အကြောင်း သေသေချာချာ မသိဘဲနဲ့ စိတ် မချသင့်ဘူး လို့ ပြောသည်။ ဖြိုးမောက်က ရယ်သည်။
ဆန်နီမောင်မှိန်ကို ...“ မင်းက ငါ့ကို အထင်သေးတာလား..ဆန်နီ ..” လို့ မေးသည်။ “ မဟုတ်ဘူး ..ဘော့စ် ..ဒီဘဲကို ကြည့်ရတာ လမ်းဘေးက ကလေကခြေနဲ့ မတူဘူး ..သန့်နေတယ် ..ဇာတ်လိုက်ပုံပေါက်နေတယ် ..” လို့ပြောသည်။ ဖြိုးမောက်က တဟားဟား အော်ရယ်သည်။
စားသောက်နေတုံး..မနေ့က စုံစမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ တရားရုံးက သူ့လူ ဖုန်းဆက်လာသည်။
“ ဆရာဖြိုးမောက် ..ဆရာ ပြောတဲ့ မဲဇာက ရိုက်မှု..ရန်ဖြစ်မှု လိုဟာတွေပေါ့..၆မှု ရှိခဲ့တယ် ..အိမ်ကျော်နင်းမှု..
မှောင်ရိပ်ခိုမှု..တွေ ရှိတယ် ..ထောင် ထဲ ၈ကြိမ် ၀င်ဘူးတယ် ..ထောင်ထဲမှာလဲ ဖိုက်လို့ တိုက်ပိတ် ခံရတာ ခဏ ခဏဘဲ..တဲ့ ..”
“ ကောင်းပြီကိုကံချွန် ..ကျေးဇူးပါဘဲ … ”
မဲဇာ ပြောတာတွေ အမှန်တွေဘဲ ပေါ့။ အင်း...နေအုံး ..သူပြောတာတချို့ စစ်ကြည့်ရအုံးမယ်။
သူ့ရောင်းရင်း ..လဗျဂန် ဆီကို လှမ်း ဆက်လိုက်သည်။
ဆိုင်အပြင်ကို သူထွက်ပြီး ခေါ်တာ။ မဲဇာ လေဖြီး မဖြီး ..ထပ် စုံစမ်းကြည့်မလို့ . .။
“ဟိတ်..လဗျ ..မေးစရာ တခု ရှိလို့ . .”
“ ဆို..ဆို ..ဘာများတုံး ..”
“ မင်းတို့ ဖါးကန့်မှာ မဲဇာ ဆိုတာ ကြားဘူးလား ...တွေ့ဘူးလား ..”
“ ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်း ငယ်ငယ်က ရုပ်နဲ့ တူတဲ့အကောင်လား ..”
“ ဟား..လဗျ သိလား...”
“ သိပြီဲလား..ဒီဘဲက တအား ခင်ဖို့ ကောင်းတာ ..အဲ့ဘက်က လက်နက်ကိုင်တွေတောင် သူ့ကို တအား ခင်တာ..
သူက လူတွေကို ခင်တတ်တယ်ဗျ..အနှမျော မရှိဘူး ..ပေးပစ် တာဘဲ . .”
“ အခု ဘယ်ရောက်နေတယ် ကြားလဲ . .”
“ မဲဆောက်ဘက် အလုပ်လုပ်နေသလိုလို ပြောကြတာဘဲ . . ”
“ ကျေးဂျူး ကဘာဆိုင် ..လဗျ..နောက်မှ တွေ့မယ် ..”
“ အိုခေ ...ဖြိုးမောက် . .”
လဗျဂန်သည် ဖြိုးမောက်နဲ့ အလုပ်တွဲ လုပ်ခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်ပြီး အလွန် သစ္စာရှိတဲ့ ကချင်လူမျိုး ရောင်းရင်း
တယောက်လဲ ဖြစ်သည်။ လဗျဂန်သည် ကျောက်စိမ်း တူး..ရွှေတူး ..အကုန်လုပ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်
မိုးစက် ကျောင်း သွားဖို့ အိမ်ထဲက ထွက်တော့ ခြံထဲကကိုကိုကြီးရဲ့ ကားနဘေးမှာ လူတယောက် ရပ်နေ
တာ တွေ့ရသည်။ကိုကိုကြီးရဲ့ တပည့်တယောက် ဖြစ်လိမ့်မည်။ မိုးစက် အရင်က တခါမှတော့ မတွေ့
ဘူးဘူး။ လူသစ်တယောက် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီဇှိုင်း ကမိုက်သည်။ ပိန်ပိန်ပါးပါးပေမဲ့ ကြည့်ကောင်းသည်။ အင်း..ဆံပင်ကောက်ကောက် ဖရိုဖရဲ
နဲ့။ အပြာရောင် ဂျင်းဂျက်ကက် အကောင်းစားနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အကောင်းစား ၀တ်ထားသည်။ ရုပ်ကတော့ အခု ဘုန်းကြီး လုပ်လိုက်တဲ့ မင်းသားကြီး ငယ်ငယ်က ရုပ်မျိုး။ ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်။
မိုးစက် ဟိုတလောက တီဗီမှာ ရှေးခေတ်က မြန်မာ အဖြူအမဲ ရုပ်ရှင်ကားဟောင်းတွေ ပြတော့ အဲဒီ မင်းသား
ကြီး ငယ်ငယ်က နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဖူးစာလမ်းဆုံ ဆိုတာကို ကြည့်မိရသည်။ ဒီလူက ဒီမင်းသားကြီး ငယ်ငယ်က ရုပ်နဲ့ တအား ဆင်တာဘဲ။
အိုး..သူကလဲ မိုးစက်ကို ကြည့်သည်။ ပြုံးပြသည်။ မိုးစက်ကတော့ သူ့ကို ပြန်မပြုံးပြပါဘူး။ ဘာ
လို့ ပြုံးပြရမှာလဲ။ ဟွန်း။ကိုကိုကြီး တပည့်တွေကို မိုးစက် ဘယ်တော့မှ အရောဝင်တာ မဟုတ်ဘူး။
မိုးစက်တို့ ကားမောင်းတဲ့ ဦးလွန်းတိုး မတွေ့ဘူး။ အိမ် အပေါ်ထပ် ၀ရံတာကနေကိုကိုကြီးက မိုးစက်ကို လှမ်းခေါ်သည်။ “ မိုးစက် ..ဒါ ..မဲဇာ...တဲ့..သူ မိုးစက်ကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပေးလိမ့်မယ် ..ဦးလွန်းတိုး တောပြန်သွားတယ် ..”
နံမည်ကလဲ။ မိုးစက်ဖြူ ပြုံးမိသည်။
မဲဇာကို စတွေ့တွေ့ချင်းထဲက မိုးစက် ရင်ခုံသလိုဘဲ။ သူ့ကို စတွေ့တွေ့ချင်းထဲက စိတ်ဝင်စားမိ. ..ကြိုက်မိ တယ်
ဆိုရင် မလွန်ဘူး ထင်တာဘဲ..။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မဲဇာရဲ့ ပုံကတော်တော် မိုက်သည်။ ဟော့ရှော့ဘဲ။
မိုးစက် ဘိုက်ချပ်ချပ်နဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို သဘောကျသည်။
မဲဇာသည် အဲလို ယောင်္ကျားမျိုး။
မဲဇာ ဘိုက်သားတွေက ချပ်ပြားနေသည်။ အင်္ကျီမပါရင် ကြွက်သားတုံးတွေ တွေ့ရမှာ သေချာသည်။
မိုးစက် သူ့ဖါသာ တယောက် ထဲ ပြုံးနေသည်။
မိုးစက် အပူမရှာချင်ခဲ့။ မိုးစက်ကို ကြိုက်တဲ့လူတွေ တပုံတခေါင်းကြီး ရှိခဲ့ပေမဲ့ ရီးစား ခုထိ မထားသေးဘူး။
ရွှေငါးတွေ မွေး ..အားရင် စာအုပ်ဖတ်..ဗီဒီယိုကြည့်..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တင်းနစ် ရိုက် ..သည်။ မိုးစက် ပထမ ဆုံး
ယောင်္ကျားတယောက် အတွက် ရင်ခုံတာ အခု မဲဇာ ဆိုတဲ့လူနဲ့ ကျမှဘဲ။
ဖြိုးမောက် ညီမလေး မိုးစက်ကို မဲဇာကို လိုက်ပို့ခိုင်းတာ အကြောင်း ရှိသည်။
သူ့ကို ငြိမ်းချမ်းစားသောက်ဆိုင်မှာ ၀ိုင်းဖိုက်တာ ခံရပြီး ကထဲက သူ့ကို သတ်ချင်တဲ့ ရန်သူတွေ ရှိနေပြီ ဆိုတာ သူ့ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတော့ ညီမလေးကို သူ့ညီမ မှန်း သိပြီး သူ့ကို မုန်းတဲ့ ရန်သူ တယောက်ယောက်က ရန်ရှာနိုင်တယ် ဆိုတာ ပူလာလို့။ မဲဇာသည် လူသုံးလေး ယောက်ကို ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက် န်ုင်တဲ့ကောင် ဆိုတော့ ညီမလေး အပြင်သွားရင် ဘော်ဒီဂတ် တယောက် လို စောင့်ရှောက် နိုင်တဲ့အတွက် ဦးလွန်းတိုး ထက် စိတ်ချရသည် လို့ သူ ထင်သည်။
မိုးစက်လဲ ကားနားရောက်ရော ဒီ မဲဇာ ဆိုတဲ့ ကျော်ဟိန်း အငယ်စား လူက ပြာပြာသလဲ ကား အနောက်ခန်း
တံခါးကို ဖွင့်ပေးသည်။ မိုးစက် လဲ..“ နောက်ကို မိုးစက်ကို တံခါးဖွင့်ပေးစရာ မလိုဘူး ..ကိုယ့်ဖါသာ ဖွင့်မယ် ..”
လို့ သူ့မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ ပြောလိုက်သည်။
မဲဇာသည် ကျောင်းထဲကို လှုပ်လီ လှုပ်လဲ့နဲ့ ၀င်သွားသော မိုးစက်ဖြူရဲ့ ရင်မောစရာ နောက်ပိုင်း အလှအပ
တွေကို ငေးမောရင်း..သက်ပြင်း မှုတ်ထုတ်လိုက်မိသည်။ ၀ှူး...သူ့ကို ဘာကြောင့်များ ဖြိုးမောက်က သူ့ညီမ
အချောစားလေးနဲ့ နီးနီးစပ်စပ် သွားလာခိုင်းနေပါလိမ့်...လို့ တွေးလိုက်မိသည်။
မိုးစက်ရဲ့ကိုယ် အနောက်ပိုင်းတွေ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် လှုပ်သွားတာရော..တုန်ခါတာရော သူ တွေ့လိုက်
တာ သူ့ စိတ်အာရုံထဲတော်တော်နဲ့ ဖျောက်လို့ မရဘူး။
မိုးစက်ဖြူသည် နံမည်နဲ့ လိုက်အောင်ဘဲ ဖြူသန့်နေသည်။ မိုးစက်ဖြူရဲ့ မျက်လုံး ၀ိုင်းစက်စက်တွေက လှ နေသည်။ နဖူးဝင်းဝင်း ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ နှာတန်လှလှ ..စွဲမက်စရာ နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ မိုးစက်ဖြူသည် တွေ့ရခဲသော ရှားရှားပါးပါး မိန်းမတယောက် ပါ။ အရာရာ လှနေတဲ့ အလှမလေး . .။
မိုးစက်ဖြူရဲ့ အရပ်က မိန်းကလေးတွေ ထဲ အရပ်မြင့်တယ် လို့ ပြော၇မဲ့အရပ် ရှိသည်။ကိုယ်လုံး သွယ်သွယ် လို့ ရုတ်တရက် ထင်နိုင်ပေမဲ့ သေသေချာချာ ကြည့်မည် ဆိုရင် မိုးစက်ဖြူရဲ့ကိုယ်လုံးကတော်တော် အချိုးကျသည်။
သူမ တင်ပါးတွေက မကြီးပေမဲ့ မငယ်လဲ မငယ်ဘူး။
ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ သူ့ရဲ့ ခါး သေးသေး အောက်မှာ ၀ိုင်းကား အိထွက်နေသည်။ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါ မိုးစက် တင်သားတွေက တုန်နေသည်။ သိမ့်သိမ့်လေး တုန်နေတာ ...။ ဟွန်း ..။
မိုးစက် တင်သားတွေကို သူ တိတ်တခိုး ကြည့်မိပြီး သူ့ကိုယ်သူ အပြစ် ရှိနေသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
မိုးစက်ကို တဏှာစိတ်နဲ့ မကြည့်မိချင်ဘူး။
မိုးစက်ကို မေတ္တာ သန့်သန့်နဲ့ ချစ်တဲ့ လူတယောက်ဘဲ သူ ဖြစ်ချင်သည်။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့်သာ သူသည် ဒီလောက ထဲ ရောက်နေပေမဲ့ သူသည် အေးချမ်း တဲ့ ဘ၀နဲ့
ကျန်ရှိတဲ့ အသက်တာကို ကုန်ဆုံးချင် သူ။
မိုးစက် ရင်စိုင်တွေကလဲ တင်းတင်းဖြိုးဖြိုး ရှိသည်။ တခါတရံ မိုးစက် လည်ဟိုက်ဟိုက် တီရှပ် ၀တ်လာသောအခါ ဘရာစီယာ အထက်က လျံထွက်နေတဲ့ ရင်သား ၀င်းဝင်းတွေကို ဖျတ်ကနဲ သူ မြင်တွေ့လိုက်ရ ဘူးသည်။ တပိုင်းတစလေး မြင်လိုက်ရတာ တောင် ရင်တုံပန်းတုံ ဖြစ်သွားရသည်။ တခုလုံးကိုများ မြင်လိုက်ရရင် ဘယ်လိုများ ဖြစ်မယ် မသိဘူး။
မိုးစက်သည် လှလွန်းနေသည်။ မိုးစက်သည် ရုပ်ရော..စိတ်ရော ဘာမှ အပြစ် ပြောစရာ မရှိဘူး။
မိုးစက်ဖြူကို မဲဇာ မြင်မြင်ချင်း အရမ်း သဘောကျသွားသည်။ ကြွေသွားသည်။ မိုးစက်ဖြူကို မြင်ယောင်သတိရပြီး ညဘက် သူ အိပ်မပျော်တာတွေ ဖြစ်လာသည်။ စွဲလန်း တဲ့ သဘောတွေ။
ဖြိုးမောက်က သူ့ကို ငြိမ်းချမ်း စားသောက်ဆိုင်မှာ သူ့ရန်သူတွေ ၀ိုင်း ဖြုတ်တာ ကြုံရလို့ သူ့ညီမလေးကို
တခုခု ဖြစ်မှာ စိတ်ပူပြီး သူ့ကို လိုက် စောင့်ရှောက်ဖို့ ကားနဲ့ ပို့ကြိုခိုင်းတာ ဖြစ်မည်။ မိုးစက်သည် ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်သည်။ သူကားမောင်းရင်း..နောက်ကြည့်မှန်ကနေ မိုးစက်ကို ခိုးခိုး ကြည့်တတ်
သည်။ မိုးစက် အရမ်း လှတာဘဲ။ မိုးစက်ကို သူ ချစ်မိနေပြီ ထင်တာဘဲ။
မဲဇာ ..“ မြင်မြင်ချင်းဘဲ ချစ်မိတယ် . . မြင်မြင်ချင်းဘဲ ကြိုက်မိတယ် . .” ဆိုတဲ့ သီချင်း အလိုက်ကို လေချွန်
မိသည်။ မိုးစက် မရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ လေချွန်တာပါ။ မိုးစက် ရှိနေရင် ..မိုးစက် အရှေ့မှာ ဆိုရင် ..လူလေးငါးယောက်နဲ့ ဖိုက် ဖို့ လုံးစ ကြောက်စိတ် မရှိတဲ့ သူ ..ဒူးတွေ တုန် ..လက်တွေ တုန်နေတတ်သည်။
မိုးစက်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်တွေ ကြောင့်။
မိုးစက်ကို အပြန်ခရီးမှာ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေမှာ ရပ်ပြီး ဆင်းဆင်း ၀ယ်ပေးရသည်။ မိုးစက် ကြိုက်တာ ဘာလဲ ဆိုတာ သူ သိနေပြီ။ “ ရွှေ မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ ” ဆိုင်က ရွှေချီဆနွင်းမကင်း ” မိုးစက်ကြိုက်တတ်တာလဲ ခဏ ခဏ ဆင်း ၀ယ်ပေးရလို့ သူ သိနေသည်။ မိုးစက်သည် သံဈေးက ငါးရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးကိုလဲ ပို့ခိုင်းသည်။
ရန်ကင်းက ငါးဆိုင်ကိုလဲ ပို့ခိုင်းသည်။
မိုးစက်နဲ့ သူ အတူတူ တွဲသွားတော့ လူတွေ သိပ်ကြည့်ကြတာဘဲ။
မိန်းမကြီးတယောက် ဆိုရင် သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ..တော်တော် လိုက်ဖက်တဲ့ အတွဲ ..လို့ ရေရွတ် သွားသည်။
မိုးစက် ကြားလိုက်သလားတော့ မသိဘူး။ သူကတော့ အရမ်း ကျေနပ် ပီတိဖြစ်ရသည်။
မိုးစက်ရဲ့ ရွှေငါးတွေကို ကျွေးဖို့ ငါးစာလဲ တခါတခါ သွားဝယ်ရသလို တခါတခါ ငါးအသစ် ရောက်လားလဲ
သွားကြည့်သည်။ မိုးစက် ကြိုက်တဲ့ ငါး အသစ် ရှိရင် မိုးစက် ၀ယ်သည်။ မိုးစက် ၀ယ်တဲ့ ငါးတွေ ထည့်
တဲ့ ပလပ်စတစ် အိတ်တွေ ဆွဲပြီး မိုးစက် အနောက်က လိုက်ရတာ မဲဇာ ပျော်နေသည်။
တသက်လုံး မိုးစက် အနားမှာ အခုလိုဘဲ လိုက်ပါနေရတဲ့ ဘ၀ ရလိုပါသည် လို့ သူ ဆုတောင်းမိနေသည်။
မိုးစက်သည် စိတ်အေးချမ်း တဲ့ ကောင်မလေး ဆိုတာ သူသိလာရသည်။ သူ့ကိုလဲ မိုးစက် ခင်မင်လာ
သည်။ မိုးစက်က မုန့်စားရင် သူ့ကိုလဲ ကျွေးသည်။ မိုးစက်နဲ့ သွားလာနေတဲ့အချိန် သူ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့
အလုပ်ကို မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ လူတွေနဲ့ ထိုးကြိတ် တိုက်ခိုက်ရတာတွေလဲ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
မိုးစက် ကြောင့် သူ အေးချမ်းနဲ့ ဘ၀ကို လိုလားလာသည်။ မိုးစက်ကို သူအရမ်း ချစ်နေမိလို့ သူ မိုက်မိုက် ကန်း
ကန်းတွေ မလုပ်လိုတော့ ဘူး။
မိုးစက်က သူ့ကို ရီးစား ရှိလား လို့မေးသည်။ သူက မရှိဘူး လို့ ပြောတော့ ဖြေတော့ အရင်ကရော ရှိဘူးလား . .လို့ မေးသည်။ သူ ဘယ်လို ဖြေရမလဲ မသိ။ မဖြေ။ သူ့အကြောင်းတွေ မလှပတဲ့ အတိတ်တွေ
ကို မိုးစက်ကို ပြောပြဖို့ ၀န်လေးနေသည်။
ဒီနေ့ မိုးစက် ကျောင်းသွားဖို့ ဆင်းလာတော့ မဲဇာ စောင့်နေတာ မတွေ့ဘူး။
ဦးလွန်းတိုးဘဲ ကားဘေးမှာ ရှိနေသည်။
“ ဦးလွန်းတိုး ..ကိုမဲဇာ ကော ...”
“ ဆရာ နယ်စပ်ကို ခိုင်းလိုက်တယ် လို့ ပြောတာဘဲ ...ကျနော် ကျောင်းပို့ပေးဖို့ ဆရာက ပြောတယ် … ”
မိုးစက် ဒီနေ့ စိတ်မပျော်ဘူး။ မဲဇာ မရှိလို့။
သူ ကျောင်းကို လိုက်ပို့နေကျ မဟုတ်လား။ ပြန်ကြိုတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် သူနဲ့ ဆိုင်တွေမှာ အစားတခုခု ၀ယ်လေ့ရှိတယ်။
အိမ်ကို ၀ယ်ခဲ့ပြီး အိမ်ကျမှ မိုးစက်က စားတာ။ တခါတလေတော့ မိုးစက် ဆိုင်မှာ ထိုင်စားသည်။ သူ့ကိုလဲ
စားခိုင်းသည်။ သူက ရှက်သလိုလို..ကြောက်သလိုလိုနဲ့။
သူနဲ့ ရွှေငါး ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေလဲ မိုးစက် သွားတယ်။ သူက မိုးစက်ကို အရမ်း စိတ်ရှည်တာဘဲ။ မိုးစက်
ကျောင်းက သီသီဌေးတို့ကကိုမဲဇာကို သဘောကျကြလို့ ..သူ့ပုံစံက မိုက်လို့ မိုးစက်ကို အမြဲ စကြတာ။ကိုမဲဇာက ခင်ဖို့ကောင်းသည်။ အလိုက်သိသည်။ မိုးစက် ဘာကြိုက်တတ်လဲသိသည်။ မိုးစက် သူ့ကို သံယောဇဉ် ညိတွယ်မိ နေသည်။
တပတ်လုံးကိုမဲဇာကို မတွေ့ဘူး။ မိုးစက်ကိုကိုကိုကြီး ကကိုမဲဇာ နယ်စပ်ကို ရောက်နေတယ် လို့ ပြောသည်။
ကိုကိုကြီးက ဘာအလုပ်တွေ လုပ်နေလဲ မသိဘူး။ ဥပဒေနဲ့ မကင်းလွတ် တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်နေ
တယ် လို့ ထင်တာဘဲ။ကိုကိုကြီးရဲ့ တပည့်တချို့က လူဆိုး လူမိုက် ပုံတွေ။ ရုပ်ရှင်ထဲက လူဆိုး အမြဲ
လုပ်တဲ့ လူကြမ်းတွေ လို ပုံစံတွေ ပေါ့။
ကိုကိုကြီး တပည့်တွေက လူဆိုးပုံတွေ ပေမဲ့ကိုကိုကြီးကိုတော့ တုန်နေအောင် ကြောက်ကြ ..လေး
စားကြသည်။ မိုးစက်ကို ဆိုရင် တချက်လေးတောင် မကြည့်ကြဘူး .။ ဟွန်း။
မိုးစက်ကို အမြဲ ကြည့်တတ်တယ်။
သူ...သူ...မိုးစက်ကို ကြိုက်များနေလား မသိဘူး။
မိုးစက် တောင် သူ့ကို ရင်ခုံမိနေသေးတာဘဲ။ သူကလဲ မိုးစက်ကို ကြိုက်မှာပါဘဲ။
တစ်တစ်....တစ်တစ် … .တစ်တစ် …
ဖြိုးမောက်ရဲ့ ဖုန်း မြည်လာသည်။
သူ့ကို ဒေါ်ရှုခင်က လုပ်ငန်းတွေ အဆင်ပြေကြောင်း ဆက်တာ။ သူ မဲဇာကို ဒေါ်ရှုခင် ဆီကို လွှတ်လိုက်
တာ။ ဒေါ်ရှုခင်က မဲဇာကို ဟိုးအရင်ထဲက သိကြောင်း ..မဲဇာနဲ့ အလုပ်အတူတူ လုပ်ဖူးကြောင်း ပြောပြသည်။ ဖြိုးမောက်က ဒေါ်ရှုခင်ကို မဲဇာ ဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲ မေးတော့ ဒေါ်ရှုခင်က မဲဇာကို သူ မခွဲနိုင်ဘူး ..
သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်နေသေးတယ် ..ခဏလေး ခေါ်ထားပါရစေ လို့ နောက်သည်။ သူက ခေါ်ထား..ဒေါ်ရှုခင် ..
အပိုင်တော့ မရဘူး ...လို့ ပြန်နောက်သည်။
မဲဇာ နယ်စပ်မှာ လုပ်ခဲ့ကိုင်ခဲ့တာတွေ ဖြိုးမောက် အရမ်း ကျေနပ်သည်။ မဲဆောက်က ပြန်လာတော့ မဲဇာကို
သူ ဘောက်ဆူး ချသည်။
မဲဇာက သူပေးသလောက်နဲ့ ကျေနပ်သည်။ မော်ကြီးတို့တောင် တခါတလေ နဲသည် ဆိုပြီး ထပ်တောင်းတတ်သည်။ မဲဇာကို မိသော် အကြောင်း ပြောပြလိုက်သည်။ မိသော် ရင်ခွင်ပြောင်းသွားကြောင်း
မဲဇာ သိတော့ကိုဖြိုးမောက် မိန်းမတွေ ပေါပါတယ်ဗျာ ..ခင်ဗျားလို စီးပွား အရှာကောင်းတဲ့ ဘောစိ တယောက်
အတွက် မိန်းမ မရှားပါဘူး ..မိသော်ကို ခေါက်ထားလိုက်စမ်းပါ ..ခင်ဗျား စိတ်ပျော်စေချင်တယ် ..ခင်ဗျားမှာ ရွေး ဆိုတဲ့ အလန်းစားလေး ရှိနေပြီဘဲ လို့ ဖြိုးမောက်ကို မဲဇာ ပြောလေသည်။
မဲဇာ ပြောတာလဲ မှန်နေတော့ ဖြိုးမောက် လက်ခံသည်။ သူ့မှာ ရွေး ရှိနေပြီဘဲ။ ရွေးကို သူ ဖွင့်မပြောရ
သေးပေမဲ့ ရွေးသည် သူ ချစ်နေမှန်း သိနေလောက်ပါပြီ။ မိသော် ထက် အစစ သာတဲ့ ရွေးကို သူရမယ်ဆိုရင် မဲဇာ
ပြောသလိုဘဲ မိသော်ကို မေ့ထားလိုက်တာက ပိုကောင်းမည်။
တစ်တစ်..တစ်တစ် . . တစ်တစ် … .။
ဖြိုးမောက်ရဲ့ ဖုန်း မြည်လာသည် … ။ ဘယ်သူလဲ ကြည့်လိုက်သည် .။
ရွေး .။ အိုး . .ရွေး သူ့ဆီ ဆက်သည်။
ဖြိုးမောက် ၀မ်းသာလိုက်တာ အရမ်းဘဲ။ စောစောက မိသော်ကို စိတ်နာပြီး တခုခု လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပျောက်ထွက်
“ ဟေး . .ရွေး . .”
“ကိုဖြိုးမောက် . .ဘာလုပ်နေလဲ … အားလား . . ”
“ အိုး … အားတာပေါ့ . .ရွေး ဘာလိုလဲ . .ဘာလုပ်ပေးရမလဲ . .”
“ ဟိ . .ကိုဖြိုးမောက်က သိပ် သဘောကောင်းတာဘဲ . .ဒါကြောင့် ရွေးက ခင်တာ သိလား . . ”
“ ပြော … .တခုခု သွား စားကြအုံးမလား . .”
“ အင်း..စားမယ် . .”
“ အိုး..တကယ် . .ဘယ်မှာ စားမလဲ … ”
“ ကျွေးမှာ လား . .”
“အင်း . .”
“ အလကား စတာပါ . .ကျနော် ကျွေးမှာ . .ဟားဟား . .မေစီမိုးကော . .”
“ ရှိပါ့ . .ဘေးမှာ ရှိတယ် . . မေစီမိုးက လေ . .ကိုမဲဇာကိုပါ ခေါ်ခဲ့ပါ … တဲ့ . . ”
မေစီမိုးရဲ့ ကောင်စုတ် . .ခွေးစုတ် . .ဆိုပြီး တဖတ်ဖတ် ရိုက်လိုက်တဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရသည်။
ရွေးက ရယ်မောရင်း . .“ကိုမဲဇာ ကြီးကော..ခေါ်လာမှာ လား . ”
“ ခေါ်လာမယ်လေ . .သူအားရင်ပေါ့ . .”
“ အားအောင် လုပ်ခိုင်း . .မေစီမိုး ကကိုမဲဇာ မပါရင် . .စိတ်ပျက်နေမှာ … ”
မေစီမိုးရဲ့ စွာတဲ့ အသံလေး ကြားလိုက်ရပြန်သည်။
“ ဘယ်မှာ တွေ့မလဲ . .”
“ ရွေးတို့က အခု ဂျန်းရှင်း အိပ်မှာ . .”
“ ကျနော်တို့ လာခေါ်မယ် လေ … ”
ဂျန်းရှင်းအိပ် ထဲ ဖြိုးမောက်နဲ့ မဲဇာ ၀င်လိုက်ချိန် အထဲက ထွက်လာတဲ့ ဓနအောင်မြင်နဲ့ မိသော် တို့နဲ့ ပက်ပင်း
တိုးသည်။ မိသော် လက်ထဲမှာ အထုပ်တွေ အများကြီး ဆွဲထားသည်။ ဖြိုးမောက်ကို မြင်တော့ မျက်နှာ ပျက်
သွားသည်။ မဲဇာလဲ မိသော် ဆိုတာကို အခုမှ အပြင်မှာ မြင်ဘူးသည်။
အသားလတ်သော ဖြိုးမောက် မျက်နှာ နီမြန်းသွားတာ မဲဇာ သတိပြုမိသည်။ ဓနအောင်မြင်နဲ့ မိသော် တိုယိုတာ
ကရောင်း အဖြူရောင်ကားကြီးထဲ ၀င်သွားတာ မဲဇာ တွေ့လိုက်ရသည်။ သူတို့ကို အပြုံးကိုယ်စီနဲ့ ရွေးနဲ့ မေစီမိုး
ရွေးသည် ဒီနေ့တော့ အနက် ရောင် လက်ပြတ်တီရှပ် . .အနက်ရောင် မီနီ စကပ် တိုတိုလေး ၀တ်ထားသည် .။ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ အိတ်လေး ကလဲ အနက်ရောင်ဘဲ။ မေစီမိုးက အပြာရောင် တောက်တောက် အင်္ကျီလက်ပြတ်နဲ့
အပြာရောင် အရင့် စကပ်တိုတိုလေး ၀တ်ထားသည်။
ရွေးသည် အသက်သုံးဆယ် လို့ မထင်ရအောင် နုပျိုနေတဲ့ ဖြိုးမောက်ကို သေသေချာချာ ကြည့်နေသည်။
ဖြိုးမောက်သည် လူငယ်ဆန်ဆန် အ၀တ်အစားတွေကိုလဲ ၀တ်တတ်သည်။ အခုလဲ ..အနက်ရောင် တီရှပ်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အနက်ရောင် ၀တ်ထားသည်။ တီရှပ် ရင်ဘတ်မှာ မာစီဒီး ဘင့်ဇ် ဆိုတဲက စာလုံးနဲ့ .။
လည်ပင်းမှာ ရွှေကြိုးခပ်တုတ်တုတ် တကုံးကိုလဲ ဆွဲထားသည်။
မဲဇာကတော့ သူ့ပုံစံအတိုင်း ဆံပင် မဖီးထား။ သိပ်ပူအိုက်လို့ ထင်သည်။ ဂျင်း ဂျက်ကက် ၀တ်မထား။
ရှပ်အပြာလက်တိုနဲ့ အပြာရောင် ဂျင်းဘောင်းဘီ ၀တ်ထားသည်။ သူတို့ အဆောက်အဦးထဲက ထွက်လာသော
အခါ ဖြိုးမောက်က ကားရီမုတ်ကို ကျွစ် ကျွစ် ဆိုပြီး နှိပ်လိုက်ပြီး ..တောက်ပြောင် သစ်လွင်တဲ့ မာစီဒီး ဘင့်ဇ် အနက်ရောင်ကြီး တံခါးတွေကို ရွေးတို့အတွက် ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
“ ၀ိုး … .မိုက်လှချည်လား . .”
ရွေးက ဖြိုးမောက်ရဲ့ ကားကြီးကို ကြည့်ပြီး သဘောကျနေသည်။ မေစီမိုးကလဲ ..“ကိုဖြိုးမောက် ..ဘယ်တုံး
က ၀ယ်လိုက်တာလဲ ...သိပ်လှတာဘဲ . .” လို့ ပြောသည်။
ဖြိုးမောက်နဲ့ မဲဇာက ကားရှေ့ခန်းမှာထိုင်ပြီး ရွေးနဲ့ မေစီမိုးက ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်သည်။
“ ဘယ်ကို သွား စားကြမလဲ . .ရွေး . .”
“ ဖူဂျီဟောက်စ် သွားမယ် . .”
ဦးလွန်းတိုး ပြောပြတာ ကြားရတော့ ဖြိုးမောက် လန့်သွားသည်။ မိုးစက်ကို ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို လုပ်တဲ့အချိန် သူ့ကား အနောက်က ကားတစီး လိုက်နေသည်...တဲ့။ ဟိုတလောက ငြိမ်းချမ်း စားသောက်ဆိုင်မှာ လာဖိုက်တဲ့ ကောင်တွေဘဲ မကျေပွဲ ထပ်လုပ်ချင်လို့ သူ့ညီမ မိုးစက်ကို တခုခု လုပ်ချင်လို့လား ..ဖြိုးမောက် စိတ်တွေ ပူထူသွားရသည်။
မဲဇာကို ချက်ချင်းခေါ်ပြီး ပြောပြသည်။ မဲဇာရဲ့ မျက်လုံးတွေ ကျဉ်းမြောင်း သွားသည် .။ မျက်မှောင်တွေ ကုတ်သွား
သည်။ လက်သီးတွေ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်လိုက်သည်။
ကိုဖြိုးမောက်..ဘာမှ မပူနဲ့ ..ကိုဖြိုးမောက် ညီမလေးကို ဘယ်သူမှ လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိစေရဘူး ..စိတ်ချပါ
လို့ ပြောသည်။ မဲဇာက ဦးလွန်းတိုးကိုဘဲ ဆက်မောင်းခိုင်းပြီး သူက အနောက်ကနေ နောက် ကားတစီး
နဲ့ လိုက်ပေးမည် လို့ ဖြိုးမောက်ကို ပြောသည်။ ဖြိုးမောက်က လိုလိုမယ်မယ် ဒါယူမလား ဆိုပြီး သေနတ်ပစ်
တဲ့ပုံ လုပ်ပြသည်။ မဲဇာက မလိုဘူး ..ကျနော်အဲဒါ မသုံးဘူး ..ဆိုပြီး နှစ်ချောင်းဆက်ဒုတ်ကို ခါးကြား ကနေ
ဒီနေ့ မဲဇာ ဦးလွန်းတိုး မောင်းတဲ့ ကား အနောက်ဘက် ကနေ မော်တော်ဆိုင်ကယ် တစီးနဲ့ လိုက်သည်။
ဦးလွန်းတိုးကို ဖုန်းပေးထားသည်။ အကယ်လို့ သူ့ကို ဟိုတနေ့က လိုက်တဲ့ကား တွေ့ရင် ဖုန်းဆက်ဖို့ မဲဇာ
မှာထားသည်။ မဲဇာ ထင်တာတော့ မိုးစက်က အရမ်းမိုက်တော့ လူငယ်တချို့က မိုးစက် ဘယ်သွားလဲ..ဘာ
ကျောင်းတက်လဲ လိုက်ချောင်းကြတာလဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မည်။ ရန်သူ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မည်။
မဲဇာ မဲဆောက်က ပြန်လာပြီးနောက် ဖြိုးမောက် ကတော်တော် သူ့ကို သဘောကျတဲ့ ပုံရှိသည်။ ပိုပြီးလဲ
ှယုံကြည်လာပုံရသည် . .။ မဲဆောက်က ဒေါ်ရှုခင်နဲ့ မဲဇာ ညိ ခဲ့တာကို ပြန်စဉ်းစားနေသည်။ ရေရေလည်လည်ကို ညိ ခဲ့တာ။
ဒေါ်ရှုခင်က လင်သေ မုဆိုးမ ..။ တယောက်ထဲ စီးပွားရေးတွေ စွတ် လုပ်နေတဲ့ အသက် ၄၀ကျော် မိန်းမတယောက် ဖြစ်သည်။ သူ့မှာ အားကောင်းမောင်းသန် တပည့်တွေ ရှိသည်။ ဒေါ်ရှုခင်သည် လိုင်းစုံ လုပ်သည်။ မူးယစ်ဆေး လာမလား..ကျောက်လာမလား..စိန်လာမလား ..လက်နက်ပုံး လိုချင်လား ..ပွဲစားလဲလုပ်သည်။ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်သည်။ လူပေါင်းလဲ ဆန့်သည်။
လင်မရှိတာ ကြာတော့ ဒေါ်ရှုခင် ဆာသည်။ ယားသည်။ တပည့်တွေနဲ့လဲ အရိုအသေ တန်မည် ဆိုပြီး
လိင်ကိစ္စ မလုပ်ဘူး။ မဲဇာ ရောက်သွားတော့ အရင်က မဲဇာက မဲဆောက်တ၀ိုက် ကျက်စားဘူးခဲ့တော့ မျက်မှန်းတန်းနေခဲ့သည်။ မဲဇာက ဖြိုးမောက်ရဲ့ လူ မို့ ဖြိုးမောက် လုပ်ချင်တာတွေ ဒေါ်ရှုခင်နဲ့ အတူ လိုက်လုပ်ကြရင်း အရက် အတူတူ သောက် ကြသလို မူးလာတော့ ညိကြသည်။ ဆာလောင်နေတဲ့ တရုပ်ကပြားမ ဒေါ်ရှုခင်ကို မဲဇာ အသားကုန် ဖြုတ်သည်။ ဒေါ်ရှုခင်ကို လုပ်ရတာ ပါဝါကောင်းဆဲ တပတ်ရစ် ခြောက်လုံး ချက်ပလက်ကားကြီးကိုမောင်းရသလိုဘဲ လို့ မဲဇာ ထင်မိသည်။
ဒေါ်ရှုခင် ကလဲ အကြိုက်တွေ့သည်။ လိုလားတောင့်တနေတာ ကြာပြီမဟုတ်လား။ မဲဇာနဲ့ တနေကုန် ဟိုတယ်ခန်းထဲက မထွက်တမ်း ဆော်ကြသည်။ တဖက်ကမ်းက စခန်းလေး တခုကို အလုပ်ကိစ္စ သွားတော့လဲ ဒေါ်ရှုခင်နဲ့ အပြတ်ဆွဲခဲ့ကြသည်။ ဒေါ်ရှုခင်လဲ မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆိုသလိုဘဲ ငယ်မူငယ်သွေးတွေ ကြွထပြီး
သူမလိုချင်တာကို အရယူသည် ..။
ဒေါ်ရှုခင်က ရန်ကုန်မှာ ဖြိုးမောက်နဲ့ မလုပ်တော့ဘဲ သူနဲ့ လာလုပ်ဖို့ မဲဇာကို ခေါ်သည်။ ဒါဆို အလုပ်လဲ ဖြစ် ည
ဘက် ဆို မဲဇာ ဖြုတ်ပေးတာတွေလဲ သူရမည် ဆိုတော့ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့။ ဒေါ်ရှုခင်နဲ့ ဖြစ်တာတွေ
မိုးစက် သိသွားရင်တော့ သူ့ကို ရေရေလည်လည် ခါ မှာဘဲ ဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်တွေးမိနေရင်း ခြောက်ခြား
တကယ်တော့ ဒေါ်ရှုခင်ကို သူ ဖြုတ်တာ အလုပ်သဘော ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ရှုခင် ဆီက သူ သိချင်တာတွေ
လိုချင်တာတွေ ရှိလို့။ ဒေါ်ရှုခင်က သူနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ဆွဲပြီးသောအခါ အရမ်း ရင်းနှီးသွား လာပြီး သူ့ကို သူမ
လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွား လှို့ဝှက်ချက်တွေကို ရိုက်မစစ်ရဘဲ ပြောပြခဲ့သည်။ သူမ တဖက်နိုင်ငံက အဆက်အသွယ်
တွေကိုလဲ ပြောပြခဲ့သည်။ မဲဇာသည် ဖြိုးမောက်ရဲ့ စီးပွားရေး ပိုမို တိုးတက်ရေး စီမံကိန်း လမ်းကြောင်းတွေ
အတွက် သူ့ကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီး လုပ်ကိုင်ကြိုးစားခဲ့သည် လို့ ဖြိုးမောက်ကို ရယ်စရာ အဖြစ် ပြောတာ ဖြိုးမောက် သဘောကျသည်။
ဒေါ်ရှုခင်ကြောင့် မဲခေါင်မြစ်ကမ်းမှာ အကြီးအကျယ် စက်ရုံတည်ပြီး မူးယစ်ဆေး တွေ ထုတ်လုပ်နေတဲ့
ကာနယ်ဆွမ်နွတ်နဲ့ မဲဇာ ဆုံခဲ့ ရသည်။ ဒေါ်ရှုခင်လဲ မဲဇာနဲ့ ပျော်လို့မဆုံး ..ပြုံးလို့မ၀ ဖြစ်နေပြီး ..သူမ သိ သ
မျှ..သူမ တတ်သမျှ ဆရာစား မချန်ဘဲ မဲဇာကို ပြသလေတော့သည်။
အင်း ...မိုးစက် ရှေ့မှာ သူ အပြစ်ရှိတဲ့ လူလို ..သူလုပ်ခဲ့တာတွေ အတွက် မိုးစက်နဲ့ မျက်လုံးချင်း မရင်ဆိုင်ရဲဘူး။
မဲဇာ မနက်ပိုင်း အေးအေးဆေးဆေးဘဲမို့ ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန်လဲ အိုကေမှာပါ ဆိုပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့ဘဲ ဆိုင်
ကယ်ပေါ်ခွထိုင်ရင်း လမ်းတဖက်က ဦးလွန်းတိုး ကားကို တွေ့ရတဲ့ နေရာမှာ စောင့်နေသည်။ မိုးစက် မကြာခင် ကျောင်းထဲက ထွက်လာတော့မည်။
ဖြိုးမောက်က မနေ့ထဲက ခြောက်လုံးပြူး ပြောင်းတို တလက် လာပေးသည်။ သူမယူ။ ရန်ကုန်မြို့
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိုးစက်ကို ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ လုပ်တာ သေနတ် ခါးထိုးထားရင် ရဲဘက်က ကွိကနဲ သူ့ကို
သိန်းငှက်တကောင်က ကြက်ကလေးတကောင်ကို ကုတ်သလို ကုတ်သွား နိုင်သည်။ ဒီလောက် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်နေတဲ့ မြို့ကြီးမှာ တတ်နိုင်ရင် သေနတ် မဆောင်ချင်ဘူး။
နှစ်ချောင်းဆက် ဒုတ် ( နန်ချပ်ကုတချောင်း )ကို နောက်ကျောမှာ ထိုးထားသည်။ အပေါ်က ဂျင်းဂျက်ကက်
၀တ်ထားသည်။ ခြေသလုံးမှာ ဒါးမြှောင်တချောင်း ထည့်ထားသည်။ ဒါဆို လုံလောက်ပြီ ထင်တာဘဲ။ ရန်ကုန်
မြို့လည်ခေါင်မှာ ရန်သူတွေဘက်က သေနတ်တော့ သုံးလိမ့်မည် သူမထင်မိ။
မိုးစက်ကို အန္တရယ် ကျရောက်မယ် ဆိုရင် မဲဇာ အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ဘဲ
..။ကိုယ့်အလုပ်ရှင် ညီမလေး မို့ တခုထဲ မဟုတ်ဘူး .။ မိုးစက်ကို သူ ချစ်နေမိသည်။ မိုးစက်ကို အရမ်းချစ်နေမိသည်။ မိုးစက်ကို ထိရင် မီးပွင့်သွားမည်။
သူ့ခါးက ဟန်းဖုန်း တဂျစ်ဂျစ်နဲ့ လှုပ်လာသည်။ ဟိုက် ..ဦးလွန်းတိုး ခေါ်နေပြီ ...။
“ ဦးလွန်းတိုး ..ဘာထူးလဲ ..”
“ ကျနော့် အနောက်ဘက်က ကားအမဲဘဲ..လိုက်လိုက်နေတာ ..”
“ ဟုတ်ပြီ ..မိုးစက် ထွက်လာရင် ..သတိထား . .”
ကားအမဲကို တွေ့ပြီ။ လူ ငါးယောက် ထိုင်နေသည်။ မဲဇာနဲ့ သူတို့ ကားနဲ့က ပိုနီးသည်။ ဒီကောင်တွေ
ဘာလုပ်မလဲ။ မိုးစက်ကို အတင်းဖမ်းခေါ် ဖို့က များနေသည်။ ဟော။
ပြောရင်းဆိုရင်း ..မိုးစက်တို့ ကျောင်း ဆင်းလာပြီ။
သူ ဆိုင်ကယ်ကို စက်နှိုးသည်။ မိုးစက် ကျောင်းထဲက ထွက်လာသည်။ အိတ် အညိုရောင်လေး လွယ်လို့..။
ဒီအိတ်လေးက သူမဲဆောက်က ပြန်လာတော့ မိုးစက်ကို လက်ဆောင်ပေးတာ။ မိုးစက် သူပေးတဲ့ အိတ်ကို
လွယ်လာလို့ သူ ထိတ်ကနဲ ၀မ်းသာသွားလို့ မှ မဆုံးသေး။
ကားအမဲ ၀ူးကနဲ မောင်းထွက်ပြီး ဦးလွန်းတိုးရဲ့ကားဘေး ပလက်ဖေါင်း ပေါ်ကို မောင်းတက်လိုက်တာ တွေ့ရသည်။ ကားထဲက မောင်းသူမှ အပ လူလေးယောက် ခုန်ထွက် လာသည်။ မဲဇာ ဆိုင်ကယ်ကို တအားမောင်းထွက်ပြီး
ကားအမဲ ဘေးကနေ ပန်းတက်ပြီး လူလေးယောက်နဲ့ မိုးစက်တို့ ကြားကို ထိုးရပ်လိုက်သည်။
“ကိုမဲဇာ . . ”
မိုးစက်လဲ အံ့အားသင့် သွားသလို လူလေးယောက်လဲ သူတို့ ရှေ့က ကာဆီးလိုက်တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ် မဲဇာ
ရောက်လာတာကို အံ့သြသွားပေမဲ့ ဒီလို ပြန်ပေးဆွဲတာကို လုပ်နေကျ သဘာရင့်နေတဲ့ ကောင်တွေ ဖြစ်ဟန်
တူသည်။ ချက်ချင်းဘဲ မဲဇာကို ၀င်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ ရှေ့ဆုံးက နှစ်ယောက်က မဲဇာကို သူတို့ရဲ့ လက်သီးဆုတ် ကြီးတွေနဲ့ ပြေးထိုးသည်။ မဲဇာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်က လွှားကနဲ ဆင်းလိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာ ဆီကို
၀င်လာတဲ့ တဖက်ရန်သူရဲ့ လက်သီးတွေကို တားဆီး ပုတ်ထုတ် လိုက်ပြီး ဒီလက်နဲ့ဘဲ သူတို့ကိုလက်ပြန်ရိုက် ထည့်လိုက်သည်။
ဖြောင်းကနဲ ဖြောင်းကနဲ မြည်အောင် ရန်သူ လူထွားလက်ကြီးတွေရဲ့ မျက်နှာ..နားထင်နဲ့ မိတ်ဆက်
သလို အနောက်က ထပ်ဝင်လာသူရဲ့ ပေါင်ကြားကို သူ့ညာခြေက တန်းကန်လိုက်သည်။ ရန်သူသုံးယောက်
လန်ထွက်အသွား နောက်ဆုံးရန်သူက ခါးကြားကို လက်နှိုက်လိုက်တာ သူတွေ့လိုက်တာနဲ့ သူ့ကျောမှာ ထိုး
ထားတဲ့ နန်ချပ်ကုကို ဆွဲထုတ်ခါ ရိုက်သည်။ ဒီရန်သူရဲ့ လက်ထဲ သေနတ်ပါလာသည်။ သူ့ဆီကို ဆန့်တန်း
ပြီး မချိန်ခင် သူ့နန်ချပ်ကုက သူ့လက်က သေနတ်ကို ရိုက်ထုတ်ပြီး ဖြစ်နေသည်။
စူးစူး ၀ါးဝါးအော်လိုက်တဲ့ ရန်သူရဲ့ အသံနက်ကြီး ထွက်ပေါ်လာသည်။ ပထမဆုံး သူထိုးလိုက်တဲ့ ရန်သူနှစ်ယောက် သူတို့ ခါးကြားထဲက သေနတ်တွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကြသည်။ “ ကျား … ” မဲဇာရဲ့ ကြုံးဝါးသံကြီးနဲ့ အတူ ၀ှစ်ကနဲ ၀ှစ်ကနဲ သူ့နန်ချပ်ကုက လေထဲမှာ ပျံဝဲပြီး သူတို့ ခေါင်းတွေကို ဖြောင်းကနဲ ဖြောင်းကနဲ ရိုက် မိသည်။ သွေးတွေ ဖြာကနဲ ဖြာကနဲ ရဲရဲနီသွားသည်။
တဖက် ရန်သူတွေရဲ့ နာကျင်စွာ အော်လိုက်တဲ့ အသံတွေက ကျယ်လောင်လှသည် . .။
မဲဇာ ရိုက်ပြီး ငြိမ်မနေ။ ရပ်မနေ။ ဆက်တိုက် လှိမ့်လှိမ့်ရိုက်သည်။ ဖြောင်းကနဲ..ဖြောင်းကနဲ။ သူ့နန်ချပ်
ကုက မြန်လွန်းလို့လည်နေတဲ့ တုတ်အပိုင်းကို မမြင်ရ။ ကား အမဲ မောင်းတဲ့လူက တံခါးဖွင့် ဆင်းပြီး မဲဇာကို
သေနတ်နဲ့ ပစ်သည်။ ဒိုင်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ သေနတ်သံ နှစ်ချက် ...။
မဲဇာ ပလက်ဖေါင်းပေါ် ၀ပ်ချလိုက်သည်။
သေနတ် ကျည်ဆံတွေ ၀စ်ကနဲ ၀စ်ကနဲ..သူ့အနား ကပ်ကပ်လေးဖြတ်သွား တာ သိလိုက်သည်။
ကျောင်း အုတ်နံရံကို ဖေါက်ကနဲ ဖေါက်ကနဲ ထိမှန်ပြီး အင်္ဂတေစတွေ ဖွားကနဲဖွားကနဲ ပဲ့ကျကုန်သည်။
ကိုမဲဇာ . .မိုးစက် ဒီမှာ . .
မိုးစက်ကို သေနတ်ထိမှာ စိုးလို့။
မိုးစက်ကို ပလက်ဖေါင်း ပေါ် ဒူးလေးထောက်ရက် တွေ့လိုက်ရလို့ မဲဇာ စိတ်သက်သာရာရ သွားသည်။
“ မိုးစက် ..လာ . . ”
“ ဇော်လေး ...မြင့်ဆောင် .. အောင်ရ … ရဲကား.....ရဲကား...ဟေ့ … ...ပြေး....ပြေး … .. ”
မဲဇာ နန်ချပ်ကုနဲ့ ရိုက်ထား လို့ ကွဲပြဲ နေပြီး မျက်နှာမှာ သွေးတွေ လူးနေတဲ့ ပလက်ဖေါင်းမှာ ဒူးထောက်ရက်
ဖြစ်နေတဲ့ လူထွားကြီးတွေ လူးလဲထ ကာ ကားထဲပြေးဝင် ကြသည်။
ရဲကားတစီး လမ်းမပေါ်က ဖြတ်သွားရင်း သေနတ်သံနှစ်ချက်ကြောင့် ကားထိုးရပ် တာ ဖြစ်သည်။ ကားအမဲနဲ့ လူတွေ ကမူးရှူးတိုး ကားမောင်း ထွက်ပြေးသွားကြသည်။ မဲဇာလဲ မိုးစက် လက်ကိုဆွဲပြီး လူအုပ်ထဲ ၀င်ပြေးသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ...စောစောက တိုက်ခိုက်ရိုက်နှက်နေတဲ့.. သေနတ် ပစ်တဲ့နေရာကို ရောက်လာတော့..၀ိုင်းအုံ
ရပ်ကြည့်နေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ သွေးစက် သွေးကွက်တွေဘဲ ကျန်နေခဲ့တာ တွေ့ကြရသည်။
မဲဇာသည် မိုးစက်ဖြူ လက်ကို ဆွဲကာ လမ်းကို ဖြတ်ကူးသည်။ မဲဇာကို မိုးစက်တော်တော့်ကို အထင်ကြီးသွား
သည်။ အားလဲ အားကိုးသွားသည်။ မဲဇာရဲ့ လက်ကို တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ပြီး မိုးစက် လိုက်သည်။ သူ့ကို
လာရန်ရှာမဲ့ လူဆိုးကောင်တွေကို မဲဇာ တယောက်နဲ့ အများ တိုက်တာခိုက်တာ မျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့လိုက်ရ
တာ ရုပ်ရှင်ထဲက လိုဘဲ။
ဖြိုးမောက် ညီမလေး မိုးစက်ဖြူကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ် တဲ့ မဲဇာကို အရမ်း ကျေးဇူး တင်သွား
သည်။ မဲဇာရဲ့ အစွမ်းအစကို နဂိုထဲက သိတဲ့ အတွက် သူ မိုးစက်ကို စောင့်ရှောက်ခိုင်းတာ။ သူမှန်သွား
သည်။ ဦးလွန်းတိုးနဲ့ မိုးစက်က မဲဇာ ရန်သူတွေနဲ့ အသေအကြေ ဖိုက်တာတွေကို ပြန်ပြောပြ ကြသည်။
မဲဇာသည် တကယ့် ဖိုက်တာဘဲ။ သူ ကတော့ ငြိမ်းချမ်း စားသောက်ဆိုင်မှာ သူ့ကို ၀င်ကူကထဲက မဲဇာ
ရဲ့ လက်ရည်ကို သိပြီးခဲ့သည်။ မဲဇာကို သူ အလုပ်ပေးခဲ့တာ သိပ်မှန်သွားသည်။ တောက် ..ဒီကောင်
တကယ် အားကိုးရတဲ့ ကောင်ဘဲ။
ဖြိုးမောက်လဲ ၀မ်းတင်နဲ့ ၀မ်းမောင်က သူ့ကို လာလာဖိုက်တာ ၂ကြိမ် ရှိနေပြီ ဆိုတော့ ဒီကောင်တွေကို
မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပြန်နှိပ်မှဘဲ လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့လူတွေနဲ့ အကြံထုတ် လေရာ မော်ကြီးပေးတဲ့ အကြံ အရ ၀မ်းမောင်ရဲ့ သမီးကို ပြန်ဖမ်းပြီး လက်စားခြေဖို့ ပြင်ဆင်လေတော့သည်။
မဲဇာကို ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပသည်။
ဖြိုးမောက်တို့ အဖွဲ့သား အားလုံး..ဦးလွန်းတိုး အားလုံး ၀မ်းသာကြသည်။ ပျော်ကြသည်။
မဲဇာ ကြောင့် .မိုးစက် ဘာမှ မဖြစ် .။ မိုးစက် မဲဇာကို အရင်ကထက် ပို ခင်သွားသည်။ ပို အားကိုးသွားသည်။
မဲဇာနဲ့ မိုးစက် ...အကြည့်ချင်း ခဏ ခဏ ဆုံသည်။ အပြုံးချင်း ဖလှယ်သည်။
ဖြိုးမောက်သည် သူ့ညီမ မိုးစက် ကြိုက်တဲ့ဆိုင်က အစားအသောက် မျိုးစုံနဲ့ ပါတီပွဲလေး ကျင်းပသည်။ ခြံထဲမှာ သူကိုယ်တိုင်အသားတွေ ကင်သည်။ ကြက်..၀က်..အမဲ ..ပုဇွန် ...ပြောင်းဖူး။
မဲဇာသည် ဖြိုးမောက်ရဲ့ အထင်ကြီး လေးစားတာ ခံရလို့ ကျန်တဲ့ မော်ကြီးတို့ကလဲ အရင်ကထက် ပို လေးစားလာသည်။ မိုးစက်သည် ဖြိုးမောက် မီးသွေးမီးဖို ပေါ်ကိုယ်တိုင် ကင်နေတဲ့ အသားကင်တွေကို ယူကာ မဲဇာကို လာကျွေးသည်။
အရင်က မနာလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်နီမောင်မှိန်လဲ ငြိမ်ကျသွားသည်။ မဲဇာရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သူ ယှဉ်လို့မရဘူး ဆိုတာ သိသွားပြီ ...။ ဖြိုးမောက်က မဲဇာကို အရမ်း ချီးမြှောက်နေပြီ ဆိုတော့လဲ ဆန်နီမောင်မှိန် ဖြိုးမောက်ကိုမလွန်ဆန်ရဲ။
မိုးစက်သည် မဲဇာကို သူ့အကိုကြီး ရှေ့မှာ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောသည်သာမက နောက်တနေ့မှာ မဲဇာ တယောက်ထဲ ကားဂိုဒေါင်ရှေ့မှာ ကားရေဆေးနေတာ တွေ့ချိန် မဲဇာဆီကို မိုးစက် သွားလိုက်သည်။
ဖြိုးမောက်သည် သူ့အိမ်မှာ လာအိပ် ဖို့ မဲဇာကို အတင်းခေါ်လို့ မဲဇာ ညက လာအိပ်တာ။ ဖြိုးမောက် ကတော်တော် ကြာကြာ သူ့ကို စကားပြောသည်။
မိုးစက် သူ့ဆီကို အိမ်ဆီကနေ လျောက်လာနေသည်။ အရမ်း မိုက်သည်။ မိုးစက်ကို သူ အရမ်း ကြိုက်သည်။
သို့ပေမဲ့ မိုးစက်နဲ့ သူ မတန်ဘူး လို့ ထင်သည်။ မိုးစက် လို အရမ်းချော လှ တောင့်တင်းပြီး ပညာတတ်တဲ့ မိန်းကလေး တယောက်သည် သူလို အကြမ်းပတမ်း လုပ်ကိုင်စားနေသော လူကြမ်းတယောက် အတွက် မဟုတ်ဘူး လို့အားငယ်စိတ်တွေနဲ့ စဉ်းစား မိ နေသည်။
“ ဟာ...မိုးစက် ...”
“ကိုမဲဇာ ..ဘာလို့ ကားဆေးနေတာလဲ . .ဦးလွန်းတိုး ဆေးပါလိမ့်မယ် … ”
“ ရပါတယ်...မိုးစက်ရယ် . .ဦးလွန်းတိုး ကကိုဖြိုးမောက်နဲ့ အပြင်ပါသွားတယ် . .ဒီကားက ညစ်ပတ် နေတယ်လေ ..
တော်ကြာ မိုးစက် သူငယ်ချင်း အိမ်သွားတဲ့အခါ ကား ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ကြီးနဲ့ မသွားစေချင်လို့ . .”
မိုးစက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောသည်။ သူမကို လူဆိုးတွေ လက်ထဲက စွမ်းစွမ်းတမံ ကယ်ဆယ်ခဲ့ တာကို
လဲ ကျေးဇူး အရမ်းတင်ကြောင်း ..ပြောသည်။
“ကိုမဲဇာက သိပ်မြန်တာဘဲ . .မိုးစက် ဖြင့် အက်ရှင်ကားတခု ထဲကလိုဘဲ လို့ ထင်မိတယ် ..ကိုမဲဇာကိုယ်ခံပညာ
တော်တော် သင်ခဲ့တာလားဟင် ..”
“ ဟုတ်တယ်..မိုးစက် . .”
“ မိုးစက်ကို သင်ပေးမလားဟင် ..”
“ မိုးစက် သင်ချင်ရင် သင်ပေးမှာပေါ့ ...”
မဲဇာသည် သူ့ရှေ့မှာ သူ့ကို ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ စကားတွေ လာပြောနေတဲ့ မိုးစက်ဖြူကို ငေးကြည့်နေမိသည်။
“ ဟိတ် ..ကိုမဲဇာ ..ဘာကြည့်နေတာလဲ ..”
မိုးစက်ဖြူ သူ့ကို ပြောလိုက်မှ သူ မိုးစက်ဖြူကို ငေးစိုက်ကြည့်နေမှန်း သတိရသွားသည်။ မဲဇာရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အချစ်
စိတ်တွေ များနေသည်။ စိတ်ထဲ ရှိတာကို မိုးစက်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်ချင်ပေမဲ့ မဖြစ်ဘူး။ ခုလို နေတာက မိုးစက်ကို အနီးကပ်တွေ့နေရပြီး မိုးစက် အတွက် တခုခု အမြဲ လုပ်ကိုင်ပေးနေနိုင်သေးသည်။
ဖွင့်ပြောလိုက်လို့ မိုးစက်က စိတ်ဆိုးသွားပြီးသူ့ကို မောင်းထုတ်လိုက်ရင် အခု ရနေတဲ့ အခြေအနေလေး
တောင် ပျက်ယွင်းသွားနိုင်သည်။ မိုးစက်က သူမ လည်ပင်းက ဆွဲကြိုးလေးကို ချွတ်ထုတ်ပြီး မဲဇာကို ပေးသည်။
“ ဒါ မိုးစက် အမြဲဆွဲထားတဲ့ ဆွဲကြိုး . .ကိုမဲဇာကို ပေးချင်တယ် ..အမြဲ ကျေးဇူးတင် ခင်မင်တယ် ဆိုတဲ့ အထိမ်း အမှတ် . .”
မိုးစက်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင် လော့ကက်နဲ့ ပလက်တီနမ် ဆွဲကြိုးလေးကို သူ လက်ခံယူလိုက်သည်။ မိုးစက်နဲ့သူ တယောက်ကိုတယောက် သာမန် ခင်မင်တာထက်တော့ ပိုနေပြီလို့ သူ ထင်မိသည်။
မော်ကြီးတို့လဲ ဖြိုးမောက်ရဲ့ ရန်သူ ၀မ်းမောင်ရဲ့ သမီးကို ဖမ်းဆွဲဖို့ အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည် ဖေါ်သည်။ ဖြိုးမောက်က မဲဇာကိုသည် အလုပ်ကို ဦးဆောင် ခိုင်းသည် .။ မဲဇာသည် သူတို့ အဖွဲ့မှာ ဖြိုးမောက်ပြီးရင် သြဇာ အရှိဆုံး ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် နေရာကို ရမှန်းမသိ ရလာသည်။ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပြီ။
၀မ်းမောင်ရဲ့ သမီး ဒေ၀ီမောင်သည် ရင်ထွားထွား ဖင် ကားကားနဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီး ဖြစ်သည် .။
ဒေ၀ီမောင်ကို ကားမောင်းသူ တယောက်ဘဲ လိုက်ပို့တာမို့ ဒီကားမောင်းသူကို မဲဇာ တို့ သေနတ်ပြပြီး ဒေ၀ီမောင်ကို ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ စခန်းကို မသိစေချင်လို့ မျက်လုံးကို အ၀တ်စ အမဲနဲ့ စည်းကာ ခေါ်ခဲ့သည်။
ဒေ၀ီမောင် မျက်လုံးကို စည်းနှောင်ထားတဲ့ အ၀တ်စကို မဲဇာ ဖယ်ဖြုတ်လိုက်သည်။
“ ရှင်...ရှင်တို့ ဘယ်သူတွေ လဲ..ဘာလို့ ကျမကို ဖမ်းခေါ်လာတာလဲ..ရှင်တို့ ဒုက္ခရောက်သွားမယ် ..ဘာမှတ်လဲ..
ကျမ အဖေနဲ့ ဘကြီးက မြေလှန်ရှာမှာဘဲ ..သူတို့ကို လျော့မတွက်နဲ့ ..”
“ ဒေ၀ီမောင် ...မင်း အဖေနဲ့ ဘကြီးက ငါတို့ကို ခဏ ခဏ လာလာ ဖိုက်နေလို့ မင်းကို အခုလို ဖမ်းခေါ်လာရတာဘဲ
..ကဲ ဒါလေးတွေ စားလိုက် သောက်လိုက် အုံး ...”
ဖြိုးမောက်က လင်ဘန်းနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကျွေးသည်။
ဒေ၀ီမောင်က ခါးခါးသီးသီး ငြင်းသည်။ “ မစားဘူး ...မစားဘူး ...နင်တို့ ကျွေးတာတွေ မစားဘူး ...”
ဖြိုးမောက်နဲ့ မဲဇာက တဟားဟား အော်ရယ်ကြသည်။ ဖြိုးမောက်က ဒေ၀ီမောင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သူ့အဖေနဲ့ ဘကြီးဆီကို ပို့မလို့ လုပ်တော့ မဲဇာက ခဏစောင့်ပါအုံးလို့ ပြောသည်။
ဒေ၀ီမောင်သည် နောက်ထပ် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာလာပြီးနောက် အရမ်း ဆာလာ လို့ အစားအသောက် တွေကိုမ
တတ်သာဘဲ စားလိုက်ရသည်။ စားပြီး မကြာခင် ငိုက်မြည်းလာရပြီး အိပ်ပျော်သွားသည်။ ဒေ၀ီမောင် နှစ်နှစ်ခြိုက်
ခြိုက် အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ မဲဇာ ရောက်လာသည်။ ဒေ၀ီမောင် အိပ်ပျော်နေပုံကို မဲဇာ ကြည့်ပြီး တဟားဟား အော်
ရယ်သည်။ သူမ စားဖို့ထားပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေ ထဲ သူ အိပ်ဆေးတွေ ခတ်ထားခဲ့သည်။ ဒေ၀ီမောင်
အိပ်ပျော်နေတုံး မဲဇာ သူမကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေ အားလုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ အတွင်းခံ ပင်တီ..ဘရာစီယာက အစ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဒေ၀ီမောင်သည် မိမွေးတိုင်း ဖင်အပြောင်သားနဲ့ နို့ကြီးတွေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ အိပ်ပျော်နေသည်။
မဲဇာ ဖြိုးမောက်ကို ခေါ်လိုက်ပြီး ပြသည်။
“ကိုဖြိုးမောက် ..ဓါတ်ပုံ ရိုက်လို့ ရပြီ ..သူ့အဖေဆီကို ဒီအတိုင်း ပို့လိုက် ..တောက် ..ခွေးမသား ..ကောင်းကောင်း မှတ်သွားမယ် . .”
ဖြိုးမောက်သည် မဲဇာရဲ့ ရက်စက် ယုတ်မာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သဘောကျနေသည်။ မဲဇာလဲ ပေါင်တန်များ ကား
နေတဲ့ ဒေ၀ီမောင်ရဲ့ ပေါင်ကြားဂွဆုံက မို့ဖေါင်းတဲ့ အ၈င်္ါစပ်ကြီးကို ဖြိုးမောက်ကို ပြသည်။
ဒေ၀ီမောင်သည် အမွှေးရိပ်ထားပုံရသည်။ သူမ အင်္ဂါစပ်ကြီးက ပြောင်တင်း ၀င်းပြောင် နေသည်။
“ ကောင်မ အပျိုဗျ ..စောက်ဖုတ်က ပေါင်ကားနေတာတောင် အဖုတ်က စိနေတယ် ..ကြည့်ရတာ မဖွင့်ထားသေးဘူး”
ဖြိုးမောက်က ဒေ၀ီမောင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်သည်။
မဲဇာက တစောင်းလေး ဖြစ်နေတဲ့ ဒေ၀ီမောင်ကို မှောက်ရက် အနေအထား ဖြစ်အောင် တွန်းရွှေ့လိုက်သည်။
“ ကြည့်..ကောင်မ ဖင်တွေကလဲ တင်းကားနေတယ် ..တော်တော် ဖင်လှတဲ့ ကောင်မ ...”
မဲဇာ က..“ တကယ်လို့ ဒီကောင်တွေ နောက်မဆုတ် အညံ့မခံရင် ..ကျနော်နဲ့ သူ့သမီးနဲ့ ဖြုတ်တာကို ဗီဒီယို ရိုက်
ပြီး ထပ်ပို့မယ် ..ကိုဖြိုးမောက် ..ကျနော်တို့ကို လာစမ်းလို့ ဘယ်ရမလဲ ..”
သူတို့ ဒေ၀ီမောင်ရဲ့ တုံးလုံးဓါတ်ပုံတွေ ပို့ပေးလိုက်တော့ မဲဇာ ထင်တဲ့အတိုင်း ..ဒီကောင်တွေ အထိနာသွားသည် .။
ရေရေလည်လည် ကြေကွဲသွားသည်။ သူတို့ဘက်က စစ်ပြေငြိမ်း စကား ဆိုလာသည်။ နောက်နောင် လုံးဝ မပတ်သက်တော့ပါ ..ဒေ၀ီမောင်ကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ . .တောင်းပန်လာသည်။
၀မ်းမောင် တို့ကို စိတ်တော့ ချလို့မရ။ ဒေ၀ီလဲ အိပ်ရာက နိုးလာတာနဲ့ သူမကိုယ်တုံးလုံး ဖင်အပြောင်သားဖြစ်နေလို့ အရမ်း တုန်လှုပ်သွားသည်။ တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ကောင်တွေဘဲ ..လို့ ဒေါသ ထွက်သည်။ ဒေ၀ီ မောင်ကို ဖမ်းလှောင်ထားတဲ့ နေရာကို မဲဇာ ရောက်လာသည်။
မဲဇာသည် ဒေ၀ီမောင်ကို စူးစူး ၀ါးဝါး ကြည့်နေသည်။ သူဘယ်နေရာတွေကို ကြည့်လဲ ဒေ၀ီမောင် သိနေ
သည်။ သူ့မျက်လုံးတွေ ဒေ၀ီမောင်ရဲ့ ဖြိုးကြွနေတဲ့ ရင်သားတွေ အပေါ်မှာ။ ဒေ၀ီမောင် လက်တဖက်နဲ့ ရင်စိုင်
တွေ တစုံလုံးကို ဖုံးအောင် ကာလိုက်သလို ပေါင်ကိုလဲ စေ့ထားပြီး နောက် လက်တဖက်နဲ့ ကာလိုက်သည်။
“ ကာမနေနဲ့ ဒေ၀ီမောင် ..မင်း အိပ်ပျော်နေတုံး မင်းရဲ့ တကိုယ်လုံးကို ဓါတ်ပုံရိုက်..မှတ်တမ်း တင်ပြီးပြီ ..”
“ ဟယ် ..ယုတ်မာလိုက်ကြတာ . .သေချင်းဆိုးတွေ . .”
“ ဒေ၀ီ မောင် ..မင်းကို ငါတို့ ပြန်လွှတ်လိုက်မယ် ..ငါတို့ ဆီမှာ မင်းပုံတွေ ရှိနေပြီးပြီ ..မင်းအဖေတို့ ဒို့ကို ထပ်ပြီး
ဖိုက်အုံးမယ် ဆိုရင် ..မင်းပုံတွေ အင်တာနက်မှာ ပျံ့ပြီသာ မှတ် ..မလုပ်ဘူး မထင်နဲ့..မင်း အဖေကို ဒို့နဲ့ ကင်းအောင်နေဖို့ ပြောလိုက် . .”
ဒေ၀ီမောင်ကို အ၀တ်တွေ ပြန်ဝတ်စေပြီး မျက်စိကို အ၀တ် စည်းကာ သူ့ကို ဖမ်းခေါ်တဲ့ နေရာ နား ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်သည်။ ၀မ်းမောင် တို့ အသံတိတ်သွားသည်။
ဖြိုးမောက်သည် မဲဇာကို သဘောကျပြီး ကျရင်းဘဲ။ မဲဇာကို ပိုပို ယုံလာသည်။ မဲဇာကို သူ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ပို အားကိုးလာသည်။ အလုပ်အတွင်းရေးတွေကို မဲဇာကို ဖွင့်ပြောပြလာသည်။ တနေ့ ဖြိုးမောက် လုပ်စရာတွေ အရမ်းများနေလို့ သူ့ကို ခေါ်ပြီး အလုပ်တခု လုပ်ခိုင်းသည်။
ဖြိုးမောက်သည် ယခုအခါ မဲဇာကို သူ့လူယုံတယောက် အဖြစ် အ စ စ ယုံကြည်နေပြီ။ အတွင်းရေးတွေကို ဖွင့်ဟပြောပြလာသည်။ အခုလဲ သူ အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စနဲ့ နယ်ကို သွားမလို့ ပြင်ခိုက် တနေရာကို သွားဖို့ ရှိလာတော့မဲဇာကို ခေါ်သည်။
“ကိုမဲဇာ . . ကျနော့်ကို တခု ကူညီဗျာ . .ကျနော်က အထက်မြန်မာပြည်ကို အရေးတကြီး ပေါ်လာလို့ အခု ချက်ချင်း သွားရမယ် ..
ခင်ဗျား တနေရာကို ကျနော့်ကိုယ်စား သွားပေးပါ ..”
“ ဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးမောက် ..ဘယ်ကို သွားပေးရမလဲ..ကျနော့်တာဝန်ထား ..”
“ ဒီလိုဗျ ..ကျနော် ဒီ အလုပ်တွေ လုပ်နေတော့ အရေးကျရင် ကျနော့်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ အဆက်အသွယ်တွေ ...အထောက်အပန့်တွေ လုပ်ထားရတယ် ..ကွန်တက် ပေါ့ဗျာ ..ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောခဲ့ဘူးကိုမဲဇာ . .ခင်ဗျားကို ယုံလို့..ပြောပြတာ .. ကျနော့်ကွန်တက်ကို ကျနော် အင်္ဂလိပ်လိုတော့..ပရိုတက်ရှင်း ဖီးစ်ပေါ့ဗျာ..ပို့စရာ ရှိနေတယ် ..ကျနော့်ကိုယ်စား သွားပို့ပေးပါ ..သူ့ဆီကို ပို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး ..သူက တိုက်ရိုက် မယူဘူး...သူ့ ဆက်ကင်း ( ဒုတိယ မိန်းမ ) ဆီကို ပို့ရမှာ ..”
“ ကောင်းပြီ..ကိုဖြိုးမောက် ..ဘယ်ကို ပို့ရမလဲ . .”
“ တိုးကြောင်ကလေး ...”
“ စိတ်ချကိုဖြိုးမောက် ”
မိုးစက်ဖြူ ခုတလော မဲဇာကို မတွေ့ဘူး။
သူ ဘယ်ရောက်နေလဲ။ ဘာလုပ်နေလဲ။ တခါတခါ သူ့ကို မတွေ့ရတာ ကြာလို့ သူ့အတွက် စိတ်ပူမိသည်။
ဒီနေ့ မိုးစက် ဒရိုင်ဘာ ဦးလွန်းတိုးကိုကိုကိုကြီး မရှိ တုံး ခေါ်မေး မိသည်။
မဲဇာ ဘယ်မှာလဲ ဆိုတာကို။
ဦးလွန်းတိုးက မဲဇာကိုကိုကိုကြီး နယ်စပ်ကို လွှတ်လိုက်သည် ..လို့ ပြောသည်။ မိုးစက်ရဲ့ စိတ်တွေ အရမ်း ပူသွားသည်။ကိုကိုကြီးရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေသည် ဥပဒေနဲ့ မကင်းဖို့က ၉၉ ရာခိုင်နှုံး သေချာနေသည် .။
ဒါကြောင့် မဲဇာ အတွက် မိုးစက် စိတ်ပူနေတာ။ မဲဇာ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ကျသွား မှာကိုလဲ မိုးစက် မမြင်ချင်ဘူး။
ဟိုတခါ လူဆိုးတွေ မိုးစက် ကျောင်းကို လာစောင့်ပြီး မိုးစက်ကို ဖမ်းဖို့ လုပ်ကထဲက မိုးစက် အပြင်ကို တယောက်ထဲ ထွက်လို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒါ စိတ်ပျက်တာ..။ကိုကိုကြီး မှာက ရန်သူ ရှိနေသည်..။
မဲဇာကို မိုးစက် တွေ့ချင်နေသည်။ သူ အဆင်ပြေပါစေ။ ။ ဘေးရန်ကင်းပါစေ။ ။ မိုးစက် ဆုတောင်းပေးနေသည်။
မဲဇာ မိုးစက် ဆုတောင်းပေးနေပေမဲ့ အဆင်မပြေလှ။ နယ်စပ်မှာ ဖြိုးမောက် ခိုင်းလိုက်တာတွေ လုပ်တုံး သူတို့ အဖွဲ့ကို တခြားအဖွဲ့တဖွဲ့က ၀င်တိုက်ခိုက်သည်။ မဲဇာက ဦးဆောင်ပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်တာကြောင့် သူတို့ အုပ်စု နိုင်လာခဲ့သည်။ မဲဇာသည် မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် ပစ်ခတ် တတ်တာကို အတူပါသွားတဲ့ ဆန်နီမောင်မှိန်
သည် အံ့သြမဆုံး ဖြစ်နေသည်။ မဲဇာကြောင့် သူတို့ နိုင်ခဲ့တာ လို့ ဆန်နီမောင်မှိန်က ခဏ ခဏ ပြောနေသည်။
ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်တော့ ဖြိုးမောက် အားရ ကျေနပ်စွာနဲ့ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုပွဲလုပ်ပေးသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခြံထဲမှာ အရက်မျိုးစုံနဲ့ ဆိုင်တွေက မှာပေးသည်။
ဖြိုးမောက်သည် မဲဇာကို ပိုပြီး သဘောကျလာသည်။ ဖြိုးမောက်ရဲ့ ညာလက်ရုံး ဖြစ်လာသည်။ မဲဇာကို ပိုစိတ်ချလာသည်။ မဲဇာကို အခွင့်အရေး ပိုပေးလာသည်။ မဲဇာ နယ်စပ်က ပြန်ရောက်ပြီး မှ ဖြိုးမောက်ရဲ့ အိမ်ကို ပြန်မရောက်သေး။ အကြောင်း မရှိဘဲနဲ့ သူ ဖြိုးမောက် အိမ်ကို သွားခဲသည်။
ဒီနေ့ သူ တဖက်နိုင်ငံက ၀ယ်လာတဲ့ မိုးစက် အတွက် လက်ဆောင်ထုပ်တွေနဲ့ ဖြိုးမောက် အိမ်ကို ရောက်လာသည်။
ဖြိုးမောက် မရှိ။ သူ ကားဂိုဒေါင် ထဲမှာ ကားအသစ်တစီး ထပ်တိုးနေလို့ ဦးလွန်းတိုးကို မေးသည်။ ဦးလွန်းတိုးက ဖြိုးမောက် မကြာခင် ကဘဲ ၀ယ်ထားတာ လို့ ပြောသည်။
သူ ကားဂိုဒေါင်ရှေ့ ရပ်နေစဉ် ၀ရံတာကို မိုးစက် ထွက်လာသည်။ မိုးစက် ခြံထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ မဲဇာကိုတွေ့သွားသည်။ လက်လှမ်းပြသည်။ သူလာခဲ့မယ် လို့လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြသည်။ မဲဇာလဲ မိုးစက်အတွက် လက်ဆောင်ထုပ်တွေ ယူကာ စောင့်နေလိုက်သည်။
အိမ် ဘေးပေါက် ကနေ မိုးစက် ထွက်လာသည်။ အနီရောင်အခံမှာ အဖြူအ၀ိုင်းလေးတွေနဲ့ ဘလောက်စ် လက်ပြတ်လေး ၀တ်ထားပြီး အောက်မှာ သူမ ၀တ်နေကျ အမဲရောင် ပြောင် ထမိန်လေးကို ခပ်တိုတို ၀တ်ထားသည်။
လက်ပြတ် ၀တ်ထားလို့ မိုးစက် လက်မောင်းသား ဖွေးဖွေးဖြူဖြူ တွေကို မြင်နေရသည်။ ထမိန်တိုတို ၀တ်ထားလို့ မိုးစက်ရဲ့ ခြေသလုံးသား ဖွေးဖွေးတွေကို မြင်နေရသည်။
မိုးစက် သူ့ဆီကို တလှမ်းချင်း လှမ်းလာနေသည်။ မျက်နှာလေးက ပြုံးလို့။
“ကိုမဲဇာ ..ပျောက်လှချည် လား ..မိုးစက် ကကိုမဲဇာကို မတွေ့တာ ကြာလို့ ခဏခဏ ဦးလွန်းတိုးကို မေးနေတာ . ”
“ ကျနော် အလုပ်နဲ့ နယ်စပ်ကို သွားနေတာ ..ဒီမှာ မိုးစက်အတွက် ..ကျနော် ၀ယ်လာတာလေးတွေ . .”
မိုးစက် လက်ထဲကို လက်ဆောင်ထုပ်တွေ ထည့်လိုက်သည်။
“ အို..အများကြီးဘဲ . .”
မိုးစက်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှာ အချစ်စိတ်တွေ များနေသည်။
မိုးစက်က မဲဇာ တခါက လိုက်ပို့တဲ့ ရန်ကင်းက ငါးဆိုင်တခုကို သွားချင်သေးသည်။ လိုက်ပို့ပါ လို့ ပြောသည်။
မဲဇာလဲ လိုက်ပို့ဖို့ ကားဂိုဒေါင်မှာ ကားသွားထုတ်သည်။ မိုးစက်ကို ပို့နေကျ တိုယိုတာကရောင်းကားဖြူကြီးကို
သူ စက်နှိုးနေတုံး ဖြိုးမောက် အပြင်က ပြန်ရောက်လာသည်။ ကားဂိုဒေါင် ရှေ့ သူ့ကားအရောက် မဲဇာကို တွေ့
လိုက်လို့ ကားရပ်ပြီး ဆင်းလာသည်။
“ကိုမဲဇာ ..အတော်ဘဲ ...”
ဖြိုးမောက် မဲဇာ ဆီကို လျောက်လာရင်း ..“ကိုမဲဇာကိုတော်ကြာနေ ခေါ်တော့မလို့ ..” လို့ ပြောလို့ မဲဇာ..“ ဘာလုပ်
ပေးရမလဲကိုဖြိုးမောက် ..” လို့ မေးသည်။
“ အလုပ်ရှိလို့ မဟုတ်ဘူး ..ခင်ဗျားကိုပေးစရာ ရှိလို့ ..ဟောဟိုက ကျနော် အသစ် ၀ယ်ထားတဲ့ ကား ..ပေးမလို့..
အဲဒါ ခင်ဗျား အတွက် . .”
“ ဟာ..ကိုဖြိုးမောက် ..မဟုတ်တာ ကြီးဗျာ ..”
“ ဟားဟား..ခင်ဗျားကို အပိုင်ပေးတာ ..ခင်ဗျားအတွက် . .ကျနော် ခင်ဗျား အရည်အချင်းကြောင့် သာ နယ်စပ် က
ကျနော့်ကုန်တွေ မဆုံး ခဲ့တာ ..ခင်ဗျား ကယ်လို့ ..ကိုမဲဇာ ..ခင်ဗျား.ကျနော့်ကို ကူတာတွေ အများကြီးဘဲ..ခင်ဗျားကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အမှတ်တရ ပေးတာပါ ..လက်ခံပါ ..”
“ကိုဖြိုးမောက် ..ကျနော့်ကို ခင်ဗျား လစာပေးပြီး အလုပ်ပေးထားတာပါ ..အလုပ်တွေ အောင်မြင်ရင်လဲ ဘောက်ဆူး
တွေလဲ ပေးခဲ့တာဘဲ ..မလိုပါဘူးဗျာ . .”
“ကိုမဲဇာ ....ကျနော် ပေးတာကို ခင်ဗျား ယူမှ ကျနော် စိတ်ချမ်းသာမယ် ..ဒီတော့ကိုမဲဇာ ဘာမှ ညင်းမနေနဲ့ ..ခင်ဗျား
လဲ ကားတစီးလိုတယ် ...”
“ ဟုတ်ကဲ့ ...ဟုတ်ကဲ့ ...ကျေးဇူးဘဲကိုဖြိုးမောက် ...”
မိုးစက် အ၀တ်အစားလဲပြီး ပြန်ရောက်လာသည်။
“ကိုကိုကြီး...မိုးစက် ငါးဆိုင် သွားချင်လို့ ..”
“ သွားလေ ..ဦးလွန်းတိုးနဲ့ကိုမဲဇာကို လိုက်ပို့ခိုင်း....”
ဖြိုးမောက်သည် အရင်လို မိုးစက်ကို ကားမောင်းသူ တယောက်ထဲနဲ့ သွားခွင့် မပြုတော့။ မိုးစက်လဲ မကြိုက်
ပေမဲ့ ဖြိုးမောက်ကို ဘာမှ မပြောတော့။ ရွှေငါးဆိုင်ကို သွားကြတော့ ဦးလွန်းတိုးက ကားထဲ ထိုင်စောင့်နေပြီး
မဲဇာနဲ့ မိုးစက် တို့ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုင်ထဲ ၀င်ကြသည်။
ရွှေငါးတွေ ကြည့်ရင်း ..မိုးစက် ကကိုမဲဇာကို မိုးစက် စိတ်ပူနေတာ . . လို့ ပြောသည်။ မဲဇာကလဲ မိုးစက်ကို တ
ချိန်လုံး သတိရနေတာ . .လို့ ပြန်ပြောသည်။ ရွှေငါးတွေကို မကြည့်ဘဲ မဲဇာကိုဘဲ မိုးစက် ကြည့်နေမိသလား မသိ
“ ဟင် ..မိုးစက် ...”
“ကိုမိုးစက်ကိုကိုကြီး ခိုင်းတာတွေ လိုက် လုပ်နေတာ ဥပဒေနဲ့ မှ ကင်းရဲ့လား ..”
“ စိတ်မပူပါနဲ့ မိုးစက်ရယ်...ကင်းပါတယ် ..”
“ကိုမဲဇာနဲ့ မိုးစက် တွေ့ချင်နေတာ ..”
“ ဒို့ရောဘဲ ..”
မဲဇာက မိုးစက်ရဲ့ လက်ကို ဖမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။
ငါးဆိုင်ထဲက ငါးကန်ကြီး တွေ ကြားထဲ သူတို့ နီးကပ်စွာ ရပ်နေကြသည်။
“ မိုးစက် ...”
“ ဒို့ မိုးစက်ကို သိပ်ချစ်တယ် ...”
မိုးစက် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ မသိမသာ တုန်နေသည်။ ဘာမှ ပြန်မပြော။ ခေါင်းလေး ငုံ့ထားသည်။ မဲဇာက မိုးစက်
“ ဒို့ကို ချစ်လား ...”
မိုးစက် မဖြေ။ သူဖက်ထားတာကိုတော့ မရုန်းဖယ်ဘူး။
မဲဇာ မိုးစက် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ဖိကပ် နမ်းလိုက်သည်။
“ ဖြေလေ . .ဒို့ကိုချစ်လား ..ချစ်တယ်မှုတ်လား ..” လို့ ထပ်မေးတော့ မိုးစက် ခေါင်းလေး ငြှိမ့်ပြသည်။ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံမို့ မိုးစက် ကြောက်နေသည် .။ ရင်တွေ တအား ခုံနေသည်။ မျက်နှာမှာ ရှက်သွေးတွေ ဖျန်းသွားလို့ နီမြန်းသွားသည်။
မဲဇာလဲ ငါးဆိုင်က ကောင်လေး ရောက်လာလို့ မိုးစက်ကို ငါးတွေ ပြသလို ဟန်ဆောင်လိုက်သည်..။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ခုအချိန်မှာ ရွှေငါးတွေကို စိတ်မ၀င်စားကြဘူး။ မဲဇာ စိတ်ထဲ အင်မတန်မှလှသောသူ့ကို ပြန်ချစ်တဲ့ မိုးစက်လေးကို တအား နမ်းပြီးရင်း နမ်းချင်ရင်း ဖြစ်နေသည်။ တယောက်နဲ့ တယောက် ချစ်မိကြပြီး
ပွင့်လင်းတဲ့ ချစ်သူ ဘ၀ ရောက်ကြပြီ ဆိုတော့ တယောက် လက်ကို တယောက် ဆုတ်ကိုင်ပြီး တယောက် မျက်နှာ
ကို တယောက် ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေကြသည်။ နမ်း ချင်လိုက်တာ မိုးစက်ရယ် ...လို့ သူ ပြောမိသည်။
မိုးစက် ရှက်သွားသည်။ မျက်နှာလေး နီမြန်းသွားသည် . .။
ဦးလွန်းတိုးသည် ငါးဆိုင်ထဲက ထွက်လာသော မဲဇာနဲ့ မိုးစက် လက်ထဲ ဘာငါးမှ ပါမလာလို့ အံ့သြနေသည်။ ခါတိုင်းဆို မိုးစက်သည် ငါးဆိုင်သွားရင် ငါးတွေ ပလပ်စတစ်အိပ်တွေနဲ့ ၀ယ်ဝယ်လာတတ်လို့ သူအမြဲဝိုင်းသယ်ပေးရသည်။ ငါး ထက် စိတ်ဝင်စားစရာ မိုးစက် တွေ့သွားလို့ ဆိုတာတော့ ဦးလွန်းတိုး မသိဘူး။
ဖြိုးမောက် အထက်မြန်မာပြည် ထွက်သွားတော့ မဲဇာကို သူ့အိမ် စောင့်ဖို့ထားခဲ့သည်။ ဦးလွန်းတိုးရဲ့ ဘေး
မှာ အခန်းလွတ် ရှိနေလို့ မဲဇာကို နေခိုင်းသည်။ သူမရှိခိုက် အိမ် လုံခြုံရေး အတွက် နေခိုင်းတာ။ ဖြိုးမောက်
ခိုင်းထားတဲ့ တိုးကြောင်ကလေးကို ငွေသွားပို့သည်။
ဖြိုးမောက်ရဲ့ အဆက်အသွယ် ဟာ ရဲမှူး ထက်စော ဆိုတာ မဲဇာသည်တော့မှ သိလာရသည်။ ရဲမှူး ထက်စောသည် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရေး အဖွဲ့က လူကြီး ...။ သူ့ ဆက်ကင်း ..ခင်ချိုချိုမြင့်ကို လက်ဆွဲအိတ် အပြည့် တထောင်တန်တွေ သူသွားပို့ပေးရသည်။ ခင်ချိုချိုမြင့်သည် အဆက်အပေါက်ကြီးတဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တောင့်တောင့် မိန်းမတယောက်။
ခင်ချိုချိုမြင့်သည် မဲဇာကိုလဲ ညုတုတုနဲ့ လုပ်နေသည်။ နောက်ကို လာလည်ဖို့ ပြောသည်။ ကြည့်ရ
တာ ရဲမှူးထက်စောက ဆက်ကင်း အဖြစ် တိုးကြောင်ကလေးမှာ အိမ်တလုံးနဲ့ ထားပေမဲ့ မှန်မှန် လာဗြုံးမပေးဘူး ထင်ပါရဲ့။
ခင်ချိုချိုမြင့်က မဲဇာကို နောက် လာလည်နော် လို့ သုံးလေးကြိမ် လောက် ပြောသည်။ ဖုန်းနံပါတ်လဲ ပေးသည်။ မဲဇာသည် လည်ဟိုက် ၀တ်ထားလို့ ခင်ချိုချိုမြင့်ရဲ့ တင်းတင်း ထယ်ထယ် ရင်သားစိုင်တွေရဲ့ အပေါ်ခြမ်းကိုမြင်နေရ သလို ခါးသေးသေး အောက်က စွင့်ကားတဲ့ တင်ကြီးတွေ ကလဲ သူမ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း နိမ့်လိုက်
မြင့်လိုက်နဲ့။ သူမသည် မဲဇာကို အထာ ခင်း.နေသလိုဘဲ။
ရေလာဖို့ မြောင်းပေးနေသည်။ မဲဇာလဲ တော်ရုံလူ ဖြိုနိုင်မယ် မဟုတ်တဲ့ ခင်ချိုချိုမြင့်ကြီးကို “ ကျနော် မမနဲ့ ထပ်တွေ့ဖို့ ကြိုးစားမယ် ..” လို့ ပြောခဲ့သည်။
မိုးစက် အိပ်လို့ မပျော်ဘူး။
သူ..သူ ...မဲဇာ … . ချစ်တယ်လဲ ပြော..ချစ်သလားလဲ မေး ..နမ်းလဲ နမ်းတယ်။
သူ့အနမ်းတွေကို ရရခြင်းတုံးက စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှား မွှန်ထွန်နေပြီး သိပ် မသိသာပေမဲ့ အခု အိပ်ရာထဲ ပြန်
ပြန်တွေးမိတော့ ကြက်သီးမွေးညင်းတွေ ထပြီး နေရထိုင်ရတာ တမျိုးကြီးဘဲ။ သူ့ကို မိုးစက်လဲ စတွေ့ တွေ့ချင်း
ထဲက စိတ်ဝင်စား မိတာဘဲ လေ။ မိုးစက် စိတ်ထဲမှာ သူ့ကို စာမတတ်ပေမတတ် လမ်းဘေးက လူတယောက် လို့
မထင်ဘူး။ သူ့လုပ်တာကိုင်တာတွေက ပညာတတ် တယောက်နဲ့ တူနေတယ်။ သူ တိုက်ခိုက် သတ်ပုတ် တာ
တွေကလဲ စနစ်တကျ သေသေချာချာ သင်ယူထားတဲ့ ပုံပေါက်တယ်။
ကိုမဲဇာ ဟာ မိုးစက်ကိုတော့ တကယ်ချစ်တယ် တာလို့ မိုးစက် ယုံတယ်။ အခုကိုကိုကြီး အထက် မြန်မာ
ပြည် ခရီးထွက်သွားတော့ကိုမဲဇာ ကားဂိုဒေါင် အပေါ်က ဒရိုင်ဘာတွေ နေဖို့ လုပ်ထားတဲ့ အခန်း တခန်းမှာ နေနေ
တယ်။ကိုကိုကြီးက အိမ်လုံခြုံဖို့အတွက်ကိုမဲဇာကို လာနေခိုင်းတာ တဲ့။
တခါတခါကိုကိုကြီးကိုဖြိုးမောက် ဟာ လည်မလိုနဲ့ “ အ” တယ်..တုံးတယ် ထင်တာဘဲ။ အိမ်က အပြင်ရန်
တော့ လုံခြုံချင် ခြုံမယ် ..ညီမလေး မိုးစက်နဲ့ ကြိုက်နေတဲ့ လူတယောက်ကို အိမ်ဝင်းထဲ လာနေစေတာတော့ ဘယ် လုံခြုံတော့မလဲ။ မိုးစက် ကတော့ကိုယ့်ချစ်သူ အနီးအနားလေး ကပ်ပြီး လာနေနေတာ..ရှိနေတာ သိပ် သဘောကျ
တာပေါ့။ ခါတိုင်း ကွန်ပြူတာစားပွဲမှာဘဲ ထိုင်နေတတ်တဲ့ မိုးစက် အခုတော့ကိုမဲဇာ ခြံထဲ လာနေတာနဲ့ ခြံထဲ ဆင်းပြီး ပန်းခူးရတာနဲ့..လမ်းလျှောက်ရတာနဲ့ လုပ်မိနေတယ်။
ကိုမဲဇာ ကလဲ ထွက်တောင် မလာဘူး။ မိန်းမကြိုက်တော့ မျှော်လိုက်တာ..မဟုတ်တော့ဘဲ ..သူထွက်မလာလို့ ..သူ့ဆီ ဆိုက်ဆိုက် သွားရတော့တယ်။ ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ တကိုယ်လုံး ချွေးတွေစိုစိုရွှဲနေအောင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အပြင်းအထန် လုပ်နေတဲ့ သူ့ကို မိုးစက် တွေ့လိုက်ရသည်။ သူ ဒီလေလာက် လုပ်လို့လဲ ဒီ လိုကြွက်သားတွေ အမြောင်းလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ် .။ သူ့တကိုယ်လုံး အောက်ပိုင်းမှာဘဲ ရှမ်းဘောင်းဘီ ပွပွတထည် ၀တ်ထား တယ်။ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းမှာ ဘာမှ ၀တ်မထားဘူး။
အို ..သူ့လည်ပင်းမှာ မိုးစက် သူ့ကို ပေးထားတဲ့ လက်ဝါးကားတိုင် လော့ကက်နဲ့ ဆွဲကြိုးလေး သူ ဆွဲထား တယ်။
သူ့ရင်အုပ် ၀မ်းဘိုက်တွေကို မိုးစက် မြင်ရတော့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာသည်။ သူ့ရှမ်းဘောင်းဘီ ကလဲ ချွေးတွေ နစ်နေအောင် စိုရွှဲနေတော့ သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ကပ်နေတာ ...အို ..မိုးစက်မျက်လုံးတွေကလဲ သွားကြည့်မိတယ်။ ပေါင်ကြားဆုံတဲ့နေရာမှာ အမြောင်းလိုက်ကြီး ဖေါင်းနေတာ ကြည့်မိရလို့ မျက်လုံးကို ကမန်းကတမ်း လွှဲဖယ်လိုက်ရသည်။
“ မိုးစက် . .”
“ မိုးစက် ..ဘာလိုလဲဟင် ..ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ..”
“ ဘာမှ မလုပ်ပေးရပါဘူး ..ကိုမဲဇာကို မတွေ့ရတာ ကြာပြီ ..ဘာလို့ မိုးစက် ဆီ မလာတွေ့တာလဲ . .”
“ တွေ့ချင်တာ အရမ်းဘဲ မိုးစက် ..ကိုဖြိုးမောက် သိသွားရင် မလွယ်ဘူး လေ . .”
သူ့ညီမကို ထိရင် ဖြိုးမောက်သည် ကျားရဲတကောင်လို..ခြင်္သေ့တကောင်လို ဖြစ်မယ်လာမယ်
ဆိုတာ မိုးစက် အရင်က အတွေ့အကြုံများကြောင့် မဲဇာ မပြောလဲ သိပါတယ်။ကိုယ့်အကို အကြောင်းကိုကိုယ်
“ ဒါဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ . .ကိုကိုကြီးကို ကြောက်တာနဲ့ဘဲ မိုးစက်နဲ့ မတွေ့တော့ဘူးလား ...”
“ ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး ..တွေ့မှာပေါ့..မိုးစက်ကို ကျနော်က ဒီလောက် ချစ်တာ ..”
မိုးစက်က ပြုံးစိစိနဲ့...“ ဘယ်လောက် ချစ်တာလဲ . .” လို့မေးသည်။
မဲဇာလဲ “ ဒီလောက်ချစ်တာ..ဒီလောက် . .” ဆိုပြီး မိုးစက်ကို ဆွဲကာ ဖက်လိုက်လေသည်။
“ အို . .”
မိုးစက်ရဲ့ ဖူးဖူး ဖေါင်းဖေါင်း နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုတ်လိုက်သည်။
မိုးစက် သူ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်လာသည်။ မဲဇာလဲ ဒီအချိန် ဆို ဦးလွန်းတိုး တရေးတမော အိပ်နေသည် ဆိုတာကို သိလို့ ကားဂိုဒေါင်ထဲ သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတုံး နမ်းလိုက်တာ ဖြစ်သည်။ မိုးစက် အတွက် ဒုတိယအကြိမ် မဲဇာ နမ်းတာကို ခံရတာ ..။ မိုးစက် ရင်တွေ ခုံတာ အရမ်း။ လက်တွေ ဒူးတွေ တုန်နေသည်။ သူ့ကျောပြင်ကို ပြန်ဖက်လိုက်မိသည်။ သူချွေးတွေ စိုရွှဲနေတာကိုလဲ သတိ မရတော့။
မိုးစက် တခါဘူးမှ မနမ်းဘူးတော့ သူ့ကို ပြန်ဖက်ထားပြီး သူနမ်းတာကိုဘဲ ခံနေမိတာ။ မဲဇာ က..“ မိုးစက် ပြန်နမ်းလေ .. ” လို့ ပြောတော့..နောက်တခါလဲ သူနမ်းရော မိုးစက်လဲ သူစုတ်သလို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်စုတ်သည်။ ဒီတခါ နှုတ်ခမ်း နှစ်ခု ကွာသွားချိန် ..မဲဇာက ..“ မိုးစက် . .ချစ်လား ..” လို့ မေးသည်။ မိုးစက်လဲ ခေါင်းလေးကို ငြှိမ့်ပြသည်။ “ ပါးစပ်က ပြော ..” လို့ သူပြောတော့ မိုးစက် လဲ..တုန်နေတဲ့ အသံနဲ့ ...“ ချစ်တယ် . .” လို့ ဖြေလိုက်သည်။
“ ဘယ်လောက်ချစ်လဲ ...” လို့ သူထပ် မေးပြန်သည်။
“ အရမ်း..အရမ်း . .” လို့ မိုးစက် ဖြေသည်။ ဒီအချိန်မှာ မိုးစက်ရဲ့ ရင်သားတွေဟာ သူ့ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ဖိကပ်မိနေတာကို သတိထားမိပြီး မိုးစက် ရှက်သွားသည်။ ရင်သားတွေကို အနောက်ကို ဆုတ်ဖို့ လုပ်သည်။ မရဘူး။ မဲဇာရဲ့ လက်တွေက မိုးစက်ကို အတင်းဘဲ ဆွဲကပ်ထားသည်။
“ ဟင် ..ကိုမဲဇာ . .”
“ကိုမဲဇာ လို့ ခေါ်တုံးဘဲ လား ..”
“ ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ ဟင် . .”
“မိုးစက်က ဘယ်လို ခေါ်ချင်လဲ . .”
“ မဲမဲ ..ခိခိ..ခိ ..”
“ မနောက်နဲ့နော် ..အိပ်ခန်းထဲ ပွေ့ချီသွားလိုက်မှာ ..”
“ မျက်မှောင်ကြီး ..ဒီလို မရှုံ့နဲ့..ကြည့်မကောင်းဘူး . .”
“ ပြောလေ . .ဘယ်လို ခေါ်မှာလဲ . .”
“ မိုးစက် ..ကိုကို လို့ ခေါ်မယ် … . တအားဖက်တာဘဲကွာ..အသက်ရှုလို့တောင် မရဘူး ..အားကလဲ သန်လိုက်တာ . .”
မိုးစက်ရဲ့ကိုယ် အောက်ပိုင်း ရှေ့ခြမ်းနဲ့ သူ့ကိုယ် အောက်ပိုင်း ရှေ့ပိုင်းနဲ့လဲ ဖိကပ်နေသည်။ စိတ်ထဲမှာ မိုးစက် တမျိုးကြီး ဖြစ်လာသည်။ တခုခုက မိုးစက် ဆီးစပ်ကို ဖိကပ်မိနေသလိုဘဲ။ စောစောက မိုးစက်တွေ့တဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက ဖုဖု ရှည်မျောမျောဟာကြီး ဖြစ်မည်။
“ မိုးစက်..သိပ်ချစ်တာဘဲကွာ ...”
“ မိုးစက် ရောဘဲ . .”
ရုတ်တရက် ခြေသံကြားလိုက်လို့ မဲဇာနဲ့ မိုးစက် လူချင်း ခွဲလိုက်ကြသည်။ ထပ်ခိုးပေါ်က ဦးလွန်းတိုး ဆင်းလာတာ။ မိုးစက်လဲ မဲဇာနဲ့ ဦးလွန်းတိုးကို နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ဘက်ကို ပြေးသွားသည်။ မိုးစက် အခန်းထဲကို ပြန်ရောက်တော့ မိုးစက် ထမိန် အနောက်ဘက်မှာ စိုကွက်နေတာ သိလိုက်သည်။ အို ..မဲဇာနဲ့ ဖက်နမ်းကြတာ ပေါင်ကြားက ရှေ့ဖင်တွေ စိုကုန်သည်။ စိတ်တွေ အရမ်း လှုပ်ရှားတာကိုး။ အင်း ..သူနဲ့ အမြဲ တွေ့ချင်နေမိတော့တာဘဲ။